iWatermark + ye-Android - Izithombe zeWatermark nevidiyo # 1 App | Plum Amazing
iWatermark + ye-Android - Izithombe zeWatermark nevidiyo # 1 App
Okusheshayo: 10 / 19 / 20
iWatermark + ye-Android - # 1 App To Watermark Izithombe & Ividiyo
Ama-watermark acashile avikela izithombe zakho
Izinhlobo eziningi ze-Watermark kunanoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza
Emashumini amabili eminyaka edlule i-iWatermark ibilithuluzi elidume kakhulu lamapulatifomu atholakalayo IMac & Windows njengeWatermark Pro naku-iOS / Ucingo / i-iPad ne-Android njengezinhlelo zokusebenza iWatermark neWatermark +. IWatermark ikuvumela ukuthi ungeze ama-watermark akho uqobo noma awebhizinisi kunoma yisiphi isithombe noma ividiyo. Uma sekufakiwe le watermark ibonisa ukudala kwakho nobunikazi balesi sithombe noma umsebenzi wobuciko.
Yini iWatermark? I-iWatermark yisoftware evumela uhlobo olusha lwe-watermarking. Isebenzisa ama-watermark edijithali ahlukahlukene abonakalayo nangabonakali ukuxhuma isithombe nomdali waso.
IWatermark yenzelwe bani? Wonke umuntu othatha izithombe namavidiyo. Sitshelwe ukuthi kubalulekile kubathwebuli bezithombe, abathwebuli bezithombe, nabantu abasebenzisa i-Instagram, Facebook namanye amasayithi wokuxhumana nabantu.
Kungani kubalulekile? Ngoba ivumela abathwebuli bezithombe ukuthi bathuthukise izithombe zabo ziye kubukhulu ngenkathi zivimbela ukulahlekelwa ukulawula nokuxhumeka njengombhali wezithombe. Manje lapho isithombe sabiwe umlobi / umthwebuli zithombe angaqhubeka nokwaziwa futhi afakwe kumakhredithi.
Kule vidiyo engezansi yizwa uTerry White, Principal Worldwide Design & Photography Evangelist we-Adobe Systems, akhulume ngokuthi usebenzisa kanjani iWatermark + neLightroom.
IWatermark ihlukile ngezindlela eziningi:
✓ Iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu ama-4 e-iOS, Mac, Windows ne-Android.
Is Kokubili uhlelo lokusebenza olujwayelekile kanye nesandiso sokuhlela isithombe esingathengisa ngqo ngaphakathi kwezithombe ze-Apple nezinye izinhlelo zokusebenza.
One Sebenzisa eyodwa noma amaningi ama-watermark kanyekanye esithombeni noma ezithombeni.
✓ I-Watermark videos nganoma yikuphi okubonakalayo okungu-7 nokubonakalayo okungu-1 = 8 okuphelele kwama-watermark.
✓ I-Watermark Izithombe nganoma yikuphi okubonakalayo okungu-9 nokubonakalayo okungu-2 = 11 okuphelele kwama-watermark.
✓ I-Watermark 1 noma izithombe eziningi kuqoqo.
✓ Ukulungiswa okubukhoma kwemiphumela efana ne-tint, isithunzi, ifonti, usayizi, i-opacity, ukujikeleza, njll.
Pre Ukubuka kuqala bukhoma kwama-watermark esithombeni ngaphambi kokucutshungulwa.
Custom 242 inkambiso namafonti angama-50 e-Apple = amafonti amakhulu angama-292 akhelwe ngaphakathi futhi alungele ukusetshenziswa kuma-watermark wombhalo.
Graphics ihluzo ezingaphezu kuka-5000 zobungcweti ezikhethekile zabathwebuli zithombe.
✓ Gcina wonke ama-watermark adaliwe ukuvula / ukuvala, ukusebenzisa kabusha, ukuthekelisa nokwabelana.
✓ izinhlobo eziyi-11 zama-watermark. Ama-watermark ayi-6 ahlukile futhi akhethekile ku-iWatermark (bheka ngezansi).
Sibheka konke okwenzayo ukwenza isithombe ngendlela oyifisayo, ukusenza esakho, i-watermark. Esikhathini esedlule ama-watermark asungulwa futhi asetshenziselwa ukufaka izinto ze-ID njengezitembu, imali, ama-banknotes, ama-passport neminye imibhalo esemthethweni. Namuhla, ngendlela efanayo, ama-watermark edijithali afaka ubunikazi bakho nesitayela ezithombeni nakumavidiyo akho. Umthwebuli zithombe Ansel Adams ubenesitayela esihlukile esimaka izithombe zakhe, njengesitayela sokudweba esiyingqayizivele I-Monetuphawula imidwebo yakhe. U-Ansel Adams wasebenzisa okumnyama nokumhlophe, ukucaciseleka, ukuqhathanisa, izindawo ezinkulu, ezingenabantu, nezikhulu njengesiginesha yakhe yize esayine nomsebenzi wakhe. Njengabathwebuli zithombe nabaculi abathandekayo ungenza isitayela somsebenzi wakho ukuze ungabi muhle kuphela futhi ubonakale kepha futhi usize ukuvikela okudalile kwakho. Kungakho sibona into ngayinye engezansi ngisho nemethadatha, i-stegomark, isayizi futhi ihlunga njengama-watermark ngoba ingakwazi ukufaka isithombe ngesitayela sakho esithile.
Izinhlobo Ezihlukile zeWatermark + 11 zamaWatermark
Izithombe ezivela kumakhamera azaziwa. Uma uthatha isithombe bese wabelana ngaso, abangani bakho bayabelana ngaso, bese kuba abangane babo, bese kuba ngabantu ongabazi nhlobo. Ngaso sonke isikhathi uma kuncane futhi kuncane futhi ekugcineni akukho ukuxhumana nawe. Emhlabeni wonke isithombe sakho 'ngumdali ongaziwa'. Izithombe eziningi ezinhle ziye zavela egazini (zaziwa kakhulu) ezazingenawo umkhondo wokuthi ungubani umnikazi. Lokho kusho ukuthi, ngaphandle kwanoma iyiphi indlela yokuthi abanye banikeze ukuvuma, ukubonga noma ukukhokha kumnikazi. Isixazululo sale nkinga yi-iWatermark, inhloso yayo ukufaka izithombe zakho ngobunikazi bakho ngezindlela ezahlukahlukene, ezibonakalayo nezingabonakali. Ubuchwepheshe obukuWatermark kanye namathuluzi ayi-watermark ayi-11 akusiza ukuthi usayine, wenze ngezifiso, wenze isitayela, uvikele futhi uvikele izithombe zakho.
IWatermark ebusweni ingabonakala ifana ncamashi nezinhlelo zokusebenza zemifanekiso ezifana nePhotoShop kodwa iWatermark ithatha i-engeli ehluke kakhulu. I-iWatermark yakhelwe ukucubungula isithombe esisodwa noma eziningi ezinamathuluzi ahlukahlukene we-watermarking, wonke akhelwe ngenhloso eyingqayizivele, ukusebenzisa isithombe sakho ngasinye ngobunikazi bakho njengomthwebuli zithombe.
- Sayina ngedijithali izithombe zakho / umsebenzi wobuciko ne-iWatermark ukuze ufune, uvikele futhi ugcine impahla yakho edumile nedumela lakho.
- Gwema izingxabano namakhanda nabakhohlisi abathi abazi ukuthi wadala wena.
- Gwema ukumangalelwa okubizayo okungabandakanyeka kulezi zimo zokusetshenziswa kabi kwe-ip.
- Gwema izimpikiswano ezisetshenziswayo.
Usebenzisa iWatermark kanye nohlobo olulodwa noma ngaphezulu kwezingu-11 zama-watermark kungasiza ukuvikela izithombe futhi kutholele abathwebuli zithombe isikweletu esifanele.
Uhlelo lokusebenza lwe-iWatermark + # 1 lweTikTok
iWatermark + #1 uhlelo lokusebenza lwe-SnapChat
iWatermark + #1 uhlelo lokusebenza lwe-Instagram
Ngezansi ngezansi kwesobunxele kukhona i-watermark emboss esithombeni se-landscape se-central park, i-NYC, ekwindla. Kuboniswe ekhasini le-canvas le-iWatermark +
[kulungisiwe]. Ukuvuselelwa Kokuhumusha Ulimi.
[kungeziwe]. Ukusekelwa kwe-Android OS 11.
[kungezwe]: I-watermark yesiginesha ingeziwe bese ukhetha bese udweba izici zesiginesha.
[kungezwe]: Iphalethi yombala omusha engezwe ngohlobo lwe-HSL, RGB yezinketho zombala, hlela umbala, umbala owuthandayo, imibala evelele ekhishwe esithombeni esikhethiwe.
[kungezwe]: Ukukhanya kwesizinda sesibhengezo sombhalo.
[kungezwe]: Ukuhunyushwa kolimi lwesiVietnam.
[kuvuselelwe]: Isigaba sosizo se-UI esibuyekeziwe futhi kungezwe isixhumanisi esisha se-Tech. Ukusekela.
[kuvuselelwe]: ukusebenza kohlelo lokusebenza okuthuthukisiwe.
[kuvuselelwe]: Ulwazi lwenguqulo yohlelo lokusebenza. [olusha]
[kulungisiwe]: Ama-albhamu alahlekile kugalari [alungisiwe]
[kuvuselelwe]: Idizayini ye-Media Gallery. [kuvuselelwe]
[ungeze] umphumela we-emboss ku-watermark yombhalo [wengeze]
[kungezwe] kungezwe ukulondolozwa kukhetho lwekhadi le-sd kokuncamelayo. qaphela uma isikhala samahhala sokulonda imidiya singaphansi kuka-1GB [kungeziwe]
[fixed] i-watermark yamahhala izokhonjiswa ezansi kwesokunxele sevidiyo [fixed]
[kuvuselelwe] ukungenisa amalebula ezithombe / amavidiyo avuselelwe & ukuthumela imiyalezo [kuvuselelwe]
[kungezwe] hudula ama-watermark kuhlu lwe-Watermark ukuhlela ngendlela ofuna ngayo [okungeziwe]
[fixed] isikhundla se-watermark kukhanvasi / ukubuka kuqala bekuhlukile kunesithombe esine-watermark [fixed]
[okusha] Manje engeza amafonti wakho wangokwezifiso!
I-HEIC ne-HEIF entsha [manje seyisekelwa ku-Android 9 + lapho ingabonakala kugalari futhi ikhonjiswe ku-iwatermark.
[mod] Kungezwe ama-codec akamuva wokufaka ikhodi kumavidiyo
[mod] Kungezwe ukusekelwa kwezithombe ezingekho kuma-albhamu.
[mod] Kungezwe ukusekelwa kwamavidiyo angekho kuma-albhamu.
[okusha] Onke amafayili abhekene nefonti angawomndeni manje asehlanganisiwe emndenini wefonti
[okusha] Kungezwe izici zeBold neze-Italic zemindeni yamafonti ezenzakalelayo neyokwezifiso.
[kungezwe]: Hlunga izithombe namavidiyo ngosuku nangesici segama. kungezwe
[kulungisiwe]: inkinga yokufaka ikhodi yekhodi yevidiyo kulungisiwe
[fixed]: izithombe zilayisha inkinga yesikhathi. kulungisiwe
[fixed]: isithonjana sincipha ngokuchofoza. kulungisiwe
[fixed]: ext kanye ne-QR code watermark amaphuzu. kulungisiwe
[okungeziwe]: 1080p noma 4k ukwesekwa kwevidiyo. kungezwe
[kungezwe]: Ukusekelwa kwezakhiwo zokwakha ezingama-64. kungezwe
[kuvuselelwe]: Isihloko sohlobo ngalunye lwe-watermark. kuvuselelwe.
[kungezwe]: Ukuxhaswa kwe-Android 10. kungezwe
[fixed]: Ukufinyelela kwegalari yezithombe ze-Android 10. kulungisiwe
- [kulungisiwe]: Iqoqo lezinkinga zokucubungula izithombe. Manje sekulungisiwe.
- [kulungisiwe]: Inkinga eshintsha ulimi. Manje sekulungisiwe.
- [kulungisiwe]: Inkinga yomphumela we-Emboss. Manje ususe lesi sici.
- [kulungisiwe]: Dweba umphumela womphumela. Manje sekulungisiwe.
- [okusha]: kubuyekezwe ukusekela i-Android 9.0
- [kulungisiwe]: ukuphahlazeka komsebenzisi okubikiwe kohlelo lokusebenza ku-Samsung Note 9
- [okusha]: ibhokisi lengxoxo
- [okusha]: ihluzo ezithuthukisiwe nokulungiswa kwezithonjana
- [okusha]: "Photo Creation Date" isigaba esingezwe kuhlu lwamathegi. Ukwakhiwa kwezithombe kufaka phakathi, unyaka, inyanga emfushane neyinde, usuku olufushane nolude lwenyanga. Kwengezwe isikhathi sefomethi yamahora angama-24. Ngenxa yomsebenzisi uPeter
- [kulungisiwe]: ukuthinta- ukuthinta i-watermark ye-bitmap njengesiginesha
- [okusha]: misc. ukuthuthuka nokulungiswa
- [okusha] App kwasendaweni - Ukusekela amazwe ahlukahlukene izilimi:
- Urdu (Pakistan), Hindi (India), Indonesian (Indonesia), Chinese Chinese (Taiwan, Hong Kong, kanye Macau), Japanese (Japan), Dutch (German), iSpain (Spain) kanye French (France)
- [kuhleliwe] Izinkinga ze-Text Watermark zilungisiwe
- [kuhleliwe] Izinkinga ze-Text Banner Watermark zilungisiwe
- [okusha] Text Banner Watermark
* IsiNgisi ulimi oluzenzakalelayo lohlelo lokusebenza. IsiShayina Esenziwe Lula (China) siyeza ngokulandelayo.
Siyabonga ngayo yonke impendulo. Sicela uligcine liza.
- [kulungisiwe] '' Kudalwe nge-iWatermark 'okuhloselwe ukubonisa ezithombeni kuhlobo lwamahhala kuvele kunguqulo ekhokhelwe ngengozi. Kulungisiwe. Ngibonga uTanya obhale futhi kamnandi wasazisa ngamaphutha ethu (igama lethu hhayi lakhe). Sibonga kakhulu kwabanye abathumele i-imeyili ngempelasonto. Ukuxolisa kuwo wonke umuntu njengoba wethukile njengoba besinjalo kulokhu. Ngoba iWatermark + neWatermark + Free zombili zisebenzisa i-codebase efanayo, ushintsho ngomzuzu owodwa lubangele lokho kudideka. Manje kulungisiwe!
- Urdu (Pakistan), Hindi (India), Indonesian (Indonesia), Chinese (China), Japanese (Japan), Dutch (German), Spanish (Spain) kanye French (France)
- [modified] Umbhalo we-Watermark Modifications
* IsiNgisi ulimi oluzenzakalelayo lohlelo lokusebenza.
- Abasebenzisi [abasha] bangabelana ngezithombe / izithombe ze-Watermark ku-WhatsApp.
- [okusha] Ukulandelana Kwezithombe, Shintshela Kuzithombe Ezedlule
- [Kulungisiwe] Izinkinga Zokulandelana Kwesithombe zixazululiwe, Ukulungiswa kwe-UI
- [kuguquliwe] Ukuthuthukiswa kwe-ArcText Watermark.
- [Fixed] Izikhundla zesikhundla se-Graphics, Text and ArcText Watermark
- [fixed] Izinkinga ze-ArcText Watermark zilungisiwe.
- [fixed] Usizo / Ukuxhaswa Kwamakhasimende Ukuxhuma Inkinga Kulungisiwe.
- [Kulungisiwe] Abasebenzisi bangabelana ngezithombe / izithombe ze-Watermark ku-Facebook Status / Timeline.
- [kulungisiwe] Ukuhlelwa kweWatermark kulungisiwe
- [kulungisiwe] Usayizi we-ArcText Watermark, imingcele - [kulungisiwe] I-UI ye-QRCode Watermark nokujikeleza kuguquliwe
- [kulungisiwe] Ukuzungeziswa kwama-watermark kudaba lwevidiyo
- [modified] Ezinye izinguquko ze-UI
- [modified] Hudula, sondeza bese uzungezisa i-Watermark ngokuthepha futhi ukusuka noma ikuphi kusikrini.
Sibonga kakhulu kubasebenzisi abathumele i-imeyili ngeziphakamiso neziphazamisi. Iminikelo yakho isizile!
- [Hudula] i-Watermark, Zoom ne-Rotation kuthuthukisiwe
- [fixed] Izithombe ukulandelana Inkinga ilungisiwe
- [fixed] Photo Disappearing Issue ilungisiwe
- [fixed] Watermark (s) Layisha Inkinga ilungisiwe
- [kulungisiwe] Ukuphenduka kwama-watermark ku-Export Issue kulungisiwe
- [fixed] Umbhalo Watermark (s) Ukunyamalala esikalini up inkinga elungisiwe
- [ilungisiwe] i-UI ithuthukisiwe
- [ilungisiwe] Isigaba sosizo sithuthukisiwe
- [okusha] i-Watermark Hudula, Sondeza bese ujikeleza Njenge-iOS
- [okusha] Engeza Qamba kabusha i-Watermark
- [okusha] engeza inombolo yenguqulo ekhasini kanye nezixhumanisi
- isithombe [esilungisiwe] esikhethiwe (singenisiwe) kusuka kugalari / sithathwe kukhamera sanyamalala ngezikhathi ezithile
- Izinkinobho [eziguquliwe] zithuthukisiwe
- [kushintshiwe] mayelana nengxoxo kuthuthukisiwe
- I-Emboss, Qopha Imiphumela Yombhalo we-watermark nezinhlobo ze-ArcText watermark.
- Khiya, Phinda kabili, futhi ususe noma yimaphi ama-watermark (ama) kuWatermark Manger.
Bona ibhukwana ngemininingwane yokuthi lokhu kusebenza kanjani.
- Kubuyekezwe imilayezo yamaphutha
- Kuthuthukiswe izithombe / amavidiyo athuthukisiwe kumafolda.
- Ukulungiswa kokuhlolwa kokuqinisekiswa kwe-Twitter, Facebook, Instagram
- Okunye okuningi ukuthuthuka kwezinto ze-ui kanye ne-misc.
- Ukuhlanganiswa kwe-Google Drayivu, manje umsebenzisi angangenisa isithombe ngqo kusuka ku-Google Drayivu aye ku-iWatermark + ezithombeni ze-watermark ngqo.
- Ngezinhlobo ze-Text watermark nezinhlobo ze-ArcText watermark, ifonti ekhethwe ngaphambilini izokhonjiswa njengoba ikhethiwe lapho umsebenzisi ezovula ingxoxo yefonti ngokuzayo
- Ngenisa izithombe ezilodwa noma eziningi kusuka kuDropbox. Sebenzisa ukhiye we-Hardware / OS ukubuyela emuva esigabeni sabaphathi sefolda.
- Ukuzinza okukhulu ezimweni zememori ephansi.
- Ama-watermark amaningi manje angasetshenziswa kunoma iyiphi ividiyo efana nawe ongayenza ezithombeni.
Siyabonga kubo bonke abasebenzisi ngempendulo enhle, imibiko yeziphazamiso neziphakamiso. Impendulo yakho (eqonde kithi) nezibuyekezo (ku-Google Play) iyona esiza uhlelo lokusebenza ukuthi luqhubekele phambili. Imibono yakho nokusekelwa kwakho kusisiza ukuthi siqondise. Okuningi okuzayo ...
- Isikhulisi sesithombe sivela ngokuthepha okude esithombeni okukhombisa indawo ekhulisiwe ngaphansi komunwe
- I-Watermark manje ihlolwe ngokuthepha noma yikuphi entweni esohlwini lwe-watermark kunalokho ngokuthepha kuphela kusithonjana sokuhlola
- Kulungiswe ukuphahlazeka
- Isithombe singabiwa kulolu hlelo lokusebenza kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Photoshop Express
Kungezwe isici se-video watermarking. Yebo! Manje, ama-watatark eWatermark + namafayela wamavidiyo.
Imodi engu-1- Landscape manje isekelwa. Shintsha phakathi kokuma kwe-Portrait ne-Landscape noma yikuphi kuhlelo lokusebenza.
2- Okungafani. ukuthuthuka kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi, ukulungiswa kwamafoni athile
I-3- Tag efakiwe yosuku ifomethwe ngokuya ngendawo esethwe ngumsebenzisi kudivayisi yayo yonke imisebenzi yokudala i-watermark equkethe inketho ye-Insert Tag
Siyabonga abasebenzisi ngempendulo enhle! Sicela uligcine liza. Sicela utshele abangane bakho mayelana lokusebenza. Abantu abaningi basiza i-iWatermark + iguquke
Ukuza ngokulandelayo isimanga :)
Imodi ye-1- Landscape isekelwa futhi manje umsebenzisi angashintsha phakathi kwemodi ye-Portrait ne-Landscape kunoma yisiphi isikrini kuhlelo lokusebenza.
I-2- Tag efakiwe yosuku ifomethwe ngokuya ngendawo esethwe ngumsebenzisi kudivayisi yayo yonke imisebenzi yokudala i-watermark equkethe inketho ye-Insert Tag.
3- Ukwenza ngcono kozinzo lohlelo lokusebenza.
- Isici esisha esikhulu. Ukusebenza kwe-Insert Tag kuhlinzekelwe i-Text Watermark, i-ArcText Watermark, i-QRCode Watermark, izinhlobo zeMetadata Watermark nezinhlobo zeStegoMark Watermark. Lokhu kusho ukuthi embhalweni wezinhlobo ze-watermark ezingenhla ungabeka i-'thegi 'emele imininingwane efakwe esithombeni ngekhamera efana, isivinini se-shutter, igama lekhamera, i-GPS, ukuvula, isikhathi, nezinye eziningi. Le thegi ifana nokuguquguquka kwalolo lwazi olubonakala esithombeni esine-watermark. Izame!
- Umsebenzi Wezobuciko Othuthukisiwe.
- Umzila ophelele wesithombe esine-watermarked uyakhonjiswa
- I-engela yama-watermark ezinhlobo ezahlukahlukene ingalungiswa ngokunikeza inani le-engeli ebhokisini lombhalo ngaphezu kwesilayida.
- Kuzo zonke izilayidi kuzo zonke izinhlobo ze-watermark, ukubuka kuqala kwe-watermark kukhonjiswa ngokuthepha isilayida.
- Isiphazamisi siyasuswa lapho i-watermark yombhalo owodwa yayisika ngokuma mpo.
- Ikhibhodi ethambile ifihla ngokuzenzakalela ngokuthepha Kwenziwe ku-Watermark Yombhalo ne-Arc
- Ezinye izimbungulu ziyasuswa
- Ukuzinza kohlelo lokusebenza kuyathuthukiswa
- Ukuxhaswa okuthuthukisiwe kokubuka izithombe ezinkulu.
- Ukuthinta isithonjana sohlu lwama-watermark manje kuvula isikrini sohlu lwama-watermark ngokushesha kunokuba sibonise isikrini sokulayisha.
- Kususwe umkhawulo wokuvula isikrini se-watermark kuqala ngaphambi kokuvula isikrini ukuhlela i-watermark ngokuthepha kabili ku-watermark esikrinini esikhulu.
Ama-Raves, Ukubuyekezwa kanye nokukhishwa kwezindaba kwe-iWatermark + ye-Android
“IWatermark + iwuhlelo lokusebenza olungcono kakhulu lokutshengisa ama-watermark engake ngalubona kuze kube manje ku-iOS. Ihlanganiswe kahle njengesandiso sokuhlela isithombe se-iOS. ” ne- “Number 5 yezinhlelo zokusebenza eziyi-100 eziphezulu zonyaka.” - UTerry White, Umvangeli Omkhulu Womhlaba Wonke Wokwakha Nezithombe ze-Adobe Systems, Inc.
“IWatermark + wuhlelo lokusebenza olunamandla kunawo wonke olutholakalayo. Ivumela abasebenzisi ukuthi bengeze izinhlobo ezifika ku-7 ze-watermark ezithombeni zabo, benze ngezifiso, bese babelana ezinkundleni zokuxhumana. ” Ukubuyekezwa kwesiza seVietnam Taimienphi.vn se-iWatermark + 10/14/20
Ukubuyekezwa kwesi-Arabhu kwe-iWatermark +
Isingeniso esingu-30 sec ku-iWatermark + ye-Android
Ama-Rave wesitolo se-Android
Yithande ilula futhi ipholile
I-Alpha ModSquad Jan 6, 2019 ngo-2: 18 AM
thanda lolu hlelo lokusebenza
Andre Rüberg Jan 1, 2019 ngo-8: 49 AM
Okokuqala ngivivinye inguqulo yamahhala… futhi ngajabula. Ngakho-ke ngathenga i-photo-version (eshibhile)… futhi ngachithwa ... Ngabuyisa imali yami ngathenga le nguqulo… yamavidiyo. Lokhu ekugcineni yilokho engikuhlolile ekuqaleni. Kungani kubalulekile ukuthenga le nguqulo? Ungenza ama-watermark angabonakali… !!! okuyinto dont ukubhubhisa izithombe zakho.
Ungalokothi ube nenkinga- uhlelo lokusebenza oluthembekile oluhlala lusebenza ukuthi ngiludinga kanjani. Ngincoma impela!
UDewi Maharini, Jul 3, 2020, 03:15
thanda njalo. ngiyabonga ngokuphendula kwakho okusheshayo. lokhu engikudingayo. vele uyisebenzise kusukela ngo-2017, usayithanda
September 24, 2017	Awekho amazwana
July 24, 2017	Awekho amazwana
November 16, 2015	Awekho amazwana
– thekelisa/ukungenisa futhi kulungisiwe. inguqulo entsha 6.7.9 izokhishwa maduze.
1/10/22 ekhishwe inguqulo 6.7.8 inguqulo entsha yakho kokubili i-iWatermark ne-iWatermark Lite. Inguqulo ye-Lite imahhala ukuyilanda ku-Apple futhi ihlala imahhala. Lokho kwenza uhlelo lokusebenza lwe-Lite kube yilona lokwabelana nabantu ngoba bangazama zonke izici ngaphambi kokuthenga. Inokuthenga ngaphakathi nohlelo ngakho zonke izici nama-watermark angathengwa ngawodwana noma ngesikhathi esisodwa ukuze wonge imali. Zonke izici ziyatholakala futhi zingasetshenziswa kodwa okuncane, 'Kudalwe nge-iWatermark' kuvela esithombeni ngasinye kuze kuthengwe leyo watermark futhi iyasuswa. Noma kuthengwa lonke iphakheji elisusa okuthi 'Kudalwe nge-iWatermark' kuwo wonke ama-watermark.
I-Lite inezipho zabasebenzisi. Izipho i-Text watermark, ikhono lokwenza i-watermark izithombe nge-Text watermark kanye nekhono lokubeka i-watermark ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Apple Photo. Umuntu angenza i-watermark yombhalo futhi awusebenzise esithombeni noma asebenzise i-watermark yombhalo ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Apple Photos futhi ngenxa yokuthi zombili lezo yizipho zamahhala ezingaphakathi nohlelo izinto 'Idalwe nge-iWatermark' ayiveli kulezo zithombe ezifakwe uphawu. Ngakho-ke, inguqulo ye-Lite iyona engcono kakhulu ongabelana ngayo nabantu ngoba bangahlola yonke into mahhala futhi bathenge ngqo abakufunayo.
Enguqulweni ye-Lite enesithombe kanye ne-watermark okungenani eyodwa uzobona ngaphansi kwesithombe esithi "Yakhiwe nge-iWatermark" thepha leso sibhengezo ukuze uvakashele ikhasi le-App Store, lapho kuthengiswa khona izinto eziyi-18: izinhlobo ze-watermark eziyi-12, 3 "watermarking amakhono” (isithombe, ividiyo kanye nokuhlela endaweni), kanye “nenqwaba” (amadili afana no-3-for-2, kanye “Nokuthuthukisa Konke”). Ezinye zinenani elinguziro, futhi yingakho “ziyizipho” (njenge-watermark YOMBHALO).
Lapho ungena esitolo, "into edayiswayo" ikhanyisa kafushane ukukhombisa ukuthi ukuyithenga kuzosusa isibhengezo esithi "Kudalwe nge-iWatermark" saleso sici obusizama.
Isengezo sefonti entsha ye-Caveat
I-watermark yesiginesha manje isihlehlise/yenza futhi
Ukusekelwa kwe-Instagram okuthuthukisiwe
Yenza i-iWatermark+ ibe yindawo yokugcina yokuhlola ngaphambi kokuyithumela ku-Instagram nakweminye imidiya.
Kungaba isithombe noma ividiyo — kuwukuhlakanipha ngaso sonke isikhathi ukuyimaka kuqala.
Enguqulweni engu-6.7 sengeze isici esisodwa esihle esisha. Manje ungakhipha futhi ungenise ama-watermark akho. Lesi isici esibaluleke ngempela njengoba sikuvumela manje ukuthi wenze ikhophi yasenqolobaneni yonke indalo yakho ebalulekile ye-watermark ochithe isikhathi uyidala. Okungcono nakakhulu manje usungakwazi ukwabelana ngalawo mafayela e-watermark nabangani abasebenzisa i-iWatermark+ noma ngaphakathi kwenkampani yakho njenge-watermark esemthethweni. Ukuze uyisebenzise, ​​sincoma ukuthi wenze ikhophi yasenqolobaneni ngokushesha, uye ku-'Uhlu lwe-Watermarklapho uzobona khona izithonjana ezintsha ezi-2.
Ibhokisi elinomcibisholo ophezulu kubha engezansi ye-nav likuvumela ukuthi uthumele / wabelane / ugcine ama-watermark akho.
Ibhokisi elinomcibisholo waphansi kubha engezansi ye-nav likuvumela ukuthi ungenise ama-watermark kusuka kufayela le-.iw + elikhishwe ngaphambilini kusuka ku-iWatermark +. Ungafaka futhi wabelane ngamafayela we-.iw + nge-imeyili noma ngabe ufuna abantu noma ngaphakathi kwenkampani.
Imininingwane engaphezulu lapha.
Umsebenzisi wokuqala? Sukuma usheshe ngokushesha ngezifundo zevidiyo ezimnandi nezifushane zeWatermark +.
Ukusetha imvume eyiyo kulula kodwa kuyabucayi, sicela ufunde lokhu.
Sicela uhlole imanuwali kuqala ukuphendula imibuzo. Ekhasini ngalinye kuhlelo lokusebenza kukhona? ngezansi kwesokudla. Ngamunye? inesixhumanisi esihlukile futhi iya ekuhlukeni ingxenye yemanuwali efanele leyo ngxenye ethile yohlelo lokusebenza. Ungafunda imanuwali lapha kanye / noma kwikhompyutha yakho. Beka uphawu lokubekisa isixhumanisi kukhompyutha yakho bese uma unombuzo ungayijabulela imanuwali kusikrini se-BIG. Ukwenza lokho kopisha isixhumanisi semanyuwali bese uthumela isixhumanisi ku-imeyili kuwe noma usithayiphe:
Chofoza lapha ukuthola ilog yezinguquko kuhlobo lwe-iOS.
Bheka i-iClock ne-CopyPaste ye-Mac noma i-iWatermark Pro ye-Mac noma Win ngqo kusuka kusayithi lethu. Thepha lokhu isixhumanisi sizothola isaphulelo sika-30% esizenzakalelayo ekalishini yakho kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza kusayithi le-plumamazing.com.()
Uma usebenzisa i-Instagram noma eminye imithombo yezokuxhumana, khumbula, ama-watermark acashile angcono kakhulu. Sifuna ukunisiza nonke nina bantu abanobuciko ukuthi nibone umsebenzi wenu. Landela iWatermark (@twitter, @Facebook, @Instagram, @Pinterest, njll.) bese umaka imisebenzi yakho yobuciko enhle #iWatermark ukuze ifakwe!
Sifuna wazi ukuthi NGEMPELA siyakwazisa ukubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-5, manje sekungaphezu kwenkulungwane. Ngiyabonga! Ngokungafani nezinhlelo zokusebenza eziningi sibuyekeza njalo i-iWatermark +. Khumbula ukuthi siyathanda ukuzwa iziphakamiso zakho.
Uma uthanda ukuthuthuka okuqhubekayo futhi ufuna ukuthi kuqhubeke, sicela uthumele isibuyekezo se-App Store kanye / noma uvumele abangani bakho (ikakhulukazi abathwebuli bezithombe) bazi ngohlelo lokusebenza. Ukukhulunywa okulula nguwe ku-Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest iwebhusayithi, njll. kungasiza umuntu anqume ukuyilanda, lapho eyithenga kusisiza ukuthi siqhubeke sikwenzela yona Ngiyabonga kakhulu!
IZINDABA Ohlwini lwezinhlelo zokusebenza eziyi-100 ezihamba phambili zonyaka iWatermark + yiNombolo 4. Nasi ukubuka konke / okokufundisa okuhle Isifundo se-iWatermark + sikaLinda Sherman. Ukubuyekezwa okuningi ku-Pinterest.
Inkinga? Sithumele i-imeyili. Ukubuyekezwa kwenkanyezi engu-1 ku-iTunes lapho ungasitholi isilungiselelo akusenzi lutho kuwe noma kithi. Ukuxhumana nathi kusuka ekhasini eliyinhloko kuhlelo lokusebenza thepha? icon ngezansi kwesokudla. Lokho kukuyisa kumanyuwali futhi enkabeni ephezulu kubha ye-nav, isixhumanisi sokuchofoza 'i-Tech Support'. Siyathanda ukuzwa kuwe uma unombuzo noma inkinga lokho hhayi embozwe yile ncwajana. Ngiyabonga.
Ulawula ukuthi ngabe izinhlelo zokusebenza zikwazi ukufinyelela kulwazi lwedivayisi kuzimvume zedivayisi yakho. Isikhathi sokuqala lapho usebenzisa izingxoxo ze-iWatermark + zizovela zicela ukusebenza ngezinhlobo ezi-3 zezindawo zolwazi, izithombe nekhamera. Isibonelo uma unganikezi imvume yokufinyelela izithombe lapho ibhokisi livela lapho-ke ngeke ukwazi ukuvula izithombe zakho.
Ukuthatha isithombe iWatermark + idinga ukufinyelela kukhamera. Vele uthephe okuthi 'KULUNGILE' kulokhu. Lokhu kukuvumela ukuthi uvule futhi usebenzise ikhamera kuhlelo lokusebenza.
Lapho uqala ukuzama ukuvula isithombe noma ividiyo uzofika kule ngxoxo ye-Apple Izimvume. Ngoba amaWatermark + watermark angabodwa kanye neqoqo lezithombe idinga 'Ukufinyelela Zonke Izithombe' Kubalulekile ukusetha le mvume kahle. Umcibisholo ukhomba inketho.
KUBALULEKILE: Uma wenqaba imvume okokuqala bese ukhetha izithombe, izithombe zokumaketha nezinye izinto eziningi ngeke zisebenze. Ukulungisa udinga ukushintsha imvume ngokuya ku-Apple's Setting App bese uthayipha ku-'Watermark + 'phezulu lapha:
Bese uthayipha ku-'Watermark + 'ukuthola izilungiselelo ze-iWatermark +. Yebo, isici esisha se-iOS 14!
Ukuze ushintshe izilungiselelo ze-iWatermark +, vula uhlelo lokusebenza lwe-Izisetho efonini yakho pheqela phansi ku-iWatermark +. Qiniseka ukuthi Izithombe (ngezansi) zinemvume esethelwe yona Zonke izithombe'
Ukuthatha isithombe iWatermark + idinga ukufinyelela imininingwane yendawo ezithombeni. Lowo usethelwa kokuthi 'Ngenkathi Usebenzisa'. Lokhu kubalulekile ngoba vumela ukubona idatha ye-GPS futhi ususe lolo lwazi ezithombeni ezinamanzi. Ivumela nokusetshenziswa kwamamaki wethegi.
Nalu uhlu lwadlalwayo lwamavidiyo wokufundisa ukukunika umlenze ku-iWatermark +. Kulula ukubuka kuthebhulethi ebekiwe noma kumonitha ye-Mac noma yeWindows. Uzozuza kakhulu ngokubuka wonke amavidiyo amafushane kakhulu. Lo mdlali uzodlala uchungechunge lwamavidiyo ongawamisa noma kunini. Amavidiyo ngamanye atholakala esigabeni sabo ngezansi. Thinta phezulu kwesobunxele sesidlali ukuze ubone uhlu lwezifundo. Kubandakanya ukulandisa, uma ungezwa okokufundisa qiniseka ukuthi ivolumu yakho iphakeme futhi nemodi yokuthula ivuliwe.
Siyabonga ngokulanda iWatermark + ilunga elisha nelithuthuke kakhulu lomndeni we-iWatermark. IWatermark iyithuluzi lama-multi-platform elidume kakhulu elitholakala ku- I-iPhone / i-iPad & Android (njengakho kokubili iWatermark neWatermark +) nokuqhubeka IMac & Windows njengeWatermark Pro. IWatermark ikuvumela ukuthi ungeze ama-watermark akho uqobo noma awebhizinisi kunoma yisiphi isithombe noma ividiyo. Uma sekufakiwe le watermark ibonisa ukudala kwakho nobunikazi balesi sithombe noma umsebenzi wobuciko.
Yini iWatermark? IWatermark isoftware yokuthwebula izithombe evumela uhlobo olusha lwe-watermarking. Isebenzisa ama-watermark edijithali ahlukahlukene abonakalayo nangabonakali (awatholakali kolunye uhlelo lokusebenza) ukuxhuma isithombe nomdali waso.
I-iWatermark ihlukile, Lezi zici azitholakali kunoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lwe-Watermark:
✓ Iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu ama-4.
One Faka eyodwa noma amaningi ama-watermark kanyekanye esithombeni, ezithombeni noma kuvidiyo.
✓ I-Watermark Izithombe nganoma yikuphi okubonakalayo okungu-10 nokubonakalayo okungu-2 = 12 okuphelele kwama-watermark.
Wat Iqoqo le-watermark 1 noma izithombe eziningi ngasikhathi sinye.
Ukubuka kuqala okubukhoma kwama-watermark (ama) ezithombeni ngaphambi kokucubungula.
Atch Iqoqo le-batch, i-landscape, izinqumo ezahlukahlukene kanye ne-watermark ivela endaweni ngayinye.
✓ Setha umbhalo omuhle futhi embossed umphumela wombhalo okhethekile.
Iling Ukuthayipha i-watermark ezindaweni ezahlukahlukene, ezijikelezisiwe futhi ezihlukanisiwe esithombeni kuwumoya.
✓ izinhlobo eziyi-12 zama-watermark. Ama-watermark ayi-7 ahlukile futhi akhethekile ku-iWatermark (bheka ngezansi).
Sibheka konke okwenzayo ukwenza isithombe ngendlela oyifisayo, ukusenza esakho, i-watermark. Esikhathini esedlule ama-watermark asungulwa futhi asetshenziselwa ukufaka izinto ze-ID njengezitembu, imali, ama-banknotes, ama-passport neminye imibhalo esemthethweni. Namuhla, ngendlela efanayo, ama-watermark edijithali afaka ubunikazi bakho nesitayela ezithombeni nakumavidiyo akho. Umthwebuli zithombe Ansel Adams ubenesitayela esihlukile esimaka izithombe zakhe, njengesitayela sokudweba esiyingqayizivele I-Monet uphawula imidwebo yakhe. U-Ansel Adams wasebenzisa okumnyama nokumhlophe, ukucaciseleka, ukuqhathanisa, izindawo ezinkulu, ezingenabantu, nezikhulu njengesiginesha yakhe yize esayine nomsebenzi wakhe. Njengabathwebuli zithombe nabaculi abathandekayo ungenza isitayela somsebenzi wakho ukuze ungabi muhle kuphela futhi ubonakale kepha futhi usize ukuvikela okudalile kwakho. Kungakho sibona into ngayinye engezansi ngisho nemethadatha, i-stegomark, isayizi futhi ihlunga njengama-watermark ngoba ingakwazi ukufaka isithombe ngesitayela sakho esithile.
Izinhlobo Ezihlukile zeWatermark + 12 zamaWatermark
Ngezansi ividiyo echaza lokhu ngokuqhubekayo.
Ungaba ngumnikazi we-iPhone futhi ungazibheki njengomthwebuli zithombe oqeqeshiwe kepha i-iPhone iyikhamera ekhokhelwayo. Ingenza izinto ezimangalisayo ngokukhanya, umbala nokuthungwa okungenakwenzeka eminyakeni embalwa edlule. Kuyinto elula, esheshayo, elula futhi ehlala njalo nawe. Kuhle kakhulu ukude nakude, ama-portraits namathafa. Noma ngubani kulezi zinsuku unethuba lokuthwebula isithombe noma ividiyo ehlukile futhi uma kwabelwane ngayo kungaba negciwane. Isithombe esifanele singaletha imali nodumo. Kepha noma lokho kungabalulekile kuwe akulimazi UKULUNGISELEKA ungaba yindawo ethile ngokuzayo lapho kwenzeka khona umcimbi othile kaNkulunkulu, owendalo, owomuntu noma wesilo kanti umlando wenziwa. Zilungiselele ukukubamba sonke isintu.
Izithombe ezivela kumakhamera azaziwa. Uma uthatha isithombe bese wabelana ngaso, abangani bakho bayabelana ngaso, bese kuba abangane babo, bese kuba ngabantu ongabazi nhlobo. Ngaso sonke isikhathi uma kuncane futhi kuncane futhi ekugcineni akukho ukuxhumana nawe. Emhlabeni wonke isithombe sakho 'ngumdali ongaziwa'. Kubuhlungu nje lokho. Izithombe eziningi ezinhle sezinamagciwane (zaziwa kakhulu) ebeziswele umkhondo wokuthi ungubani umnikazi. Lokho kusho ukuthi, ngaphandle kwanoma iyiphi indlela yokuthi abanye banikeze ukuvuma, ukubonga noma ukukhokha kumnikazi. Isixazululo sale nkinga yi-iWatermark, inhloso yayo ukufaka izithombe zakho ngobunikazi bakho ngezindlela ezahlukahlukene, ezibonakalayo nezingabonakali. Ubuchwepheshe obukuWatermark kanye namathuluzi ayi-watermark ayi-12 akusiza ukusayina, ukwenza ngezifiso, ukwenza isitayela, ukuvikela nokuvikela izithombe zakho. Inikeza izindlela ezahlukahlukene zokuqinisekisa ukuthi igama lakho, igama lenkampani, i-url noma i-imeyili lihlotshaniswa nezithombe zakho.
- Gwema izimpahla ezisunguliwe (ip) izingxabano.
Usebenzisa iWatermark kanye nohlobo olulodwa noma ngaphezulu kwezingu-12 zama-watermark kungasiza ukuvikela izithombe futhi kutholele abathwebuli zithombe isikweletu esifanele.
Izinhlelo zokusebenza ezi-2, Ezamahhala nezikhokhelwayo
Kukhona inguqulo yamahhala neyakhokhelwa
iWatermark + Mahhala
Abantu abaningi bazama eyokuqala mahhala ukuzama uhlelo lokusebenza nezici. Inesithonjana esinamahhala kusibhengezo esiluhlaza. Ayinazikhangiso futhi ikuvumela ukuthi usebenzise zonke izici kepha futhi ingeza i-watermark yethu kuzo zonke izithombe ezithi, 'Idalwe ngeWatermark + Free'. Wamukelekile ukuqhubeka nokuyisebenzisa noma ukuthuthukela kuhlelo lokusebenza olukhokhelwayo olungenayo i-watermark yethu eyengeziwe.
Le nguqulo ekhokhelwayo isekela ukuvela kwe-iWatermark +. Njalo lapho othile ethenga ikhophi isekela izinhlelo eziningi zokuthuthukisa uhlelo lokusebenza oluzuzisa wonke umuntu. Yebo! Uhlelo lokusebenza olukhokhelwayo alungezi i-watermark yethu esithombeni sakho eyakho kuphela. Ngemuva kokuthola inguqulo ekhokhelwayo khumbula ukususa inguqulo yamahhala njengoba ungasayidingi.
Izinhlelo zokusebenza zabelana ngokuncamelayo ngakho-ke noma yimaphi ama-watermark owadalile ku-iWatermark + Free azotholakala ku-iWatermark + uma uyithenga.
Kunezinye izinhlobo eziningi ongazenza thola kusayithi lethu.
OKUBALULEKILEI-iWatermark + ikhombisa kuphela izithombe zakho ngama-watermark. Akusoze kwashintsha isithombe sokuqala. Ngokuphepha ungazisusi izithombe zakho zoqobo futhi uhlale ukhumbula ukuzenza izipele.
IWatermark + iza nemitapo yolwazi emi-2 yemidwebo eyengeziwe.
I-5000 SVG (inikezela ngokuphelele ngosayizi) imidwebo yazo zonke izinhlobo zezinto nezimpawu futhi
Imidwebo engu-50 ye-bitmap (ingaphikishelwa izithombe eziphezulu ze-res) amasiginesha wabantu abadumile, ama-logo, njll.
IWatermark + ikwenza kube lula ngokumangazayo ukudala ama-watermark futhi kungekudala uzofuna ukudala okwakho. Gcina ama-watermark akho ukuze uphinde uwasebenzise ngokushesha ukumboza izidingo ezahlukahlukene nezinhlobo zezithombe.
iWatermark akuyona nje uhlelo lokusebenza kodwa futhi 'Isandiso'engasetshenziswa ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwezithombe ze-iOS kanye nezinye izinhlelo zokusebenza. Lokhu kusho ukuthi manje usungakwazi ukufinyelela ngokushesha kumakhono we-watermarking hhayi ku-iWartermark + kuphela kodwa futhi nakwezinye izinhlelo zokusebenza, lokhu kungasiza kakhulu.
Njengesandiso esisetshenziswe ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwe-Apple's Photo, ama-watermark eWatermark kepha ukonga kuphathwa uhlelo lokusebenza lwe-Apple Photos. Uhlelo lokusebenza lwezithombe lulondoloza zonke izinguquko esithombeni kuleso sithombe, ngakho-ke i-watermark nezinye izinguquko zigcinwa njengezendlalelo. Uma ufuna ukuyisusa ushaye u-Hlela futhi bese ushaya okuthi Buyela emuva ukuze ubuyele esithombeni sokuqala.
1. Khetha imidiya (isithombe, izithombe noma ividiyo).
2. Bese ukhetha (gqamisa noma umake uphawu) i-watermark noma ama-watermark. Noma, ngokuzikhethela, dala entsha ngezinhlobo eziyi-12 ze-watermark, shaya u-'Done '
3. Gcina noma wabelane ngesithombe sakho esine-watermark ku-Camera Camera (lokhu kusibeka ku-Camera Camera naku-iWatermark + Album), i-imeyili, i-Facebook, i-Twitter, i-LinkedIn, i-Pinterest, i-Buffer, noma i-Evernote, njll.
Vula iWatermark +. Lokhu esikubiza ngokuthi yi- Ikhasi le-Canvas. Lapha uqala ukudala futhi ubuke kuqala umsebenzi wakho wobuciko. Ngezansi kukhona ibha ye-Nav.
1. Okokuqala, thinta 'Khetha Imidiya'isithonjana
ezansi kwesobunxele sesithombe-skrini esingenhla ukukhetha isithombe, izithombe, ividiyo noma ifayela lokungenisa (kusuka kusevisi yefu).
2. Thinta isithonjana se- 'Watermark'
ezansi kwekhasi le-Canvas elingenhla (ngenhla) ukubona uhlu lwama-watermark kulokho esikubiza ngokuthi yi- Uhlu Lwama-Watermark Ikhasi (ngezansi). Ungase futhi ukhethe okuthi 'Dala i-Watermark' phezulu ekhasini ukudala i-watermark entsha yangokwezifiso kodwa uyeke lokho kumnandi isikhashana bese kunalokho sikhethe i-watermark efakiwe. Iya ephuzwini elilandelayo ngezansi ukwenza lokho.
3. Thepha ngokulandelayo ngakwesokunxele kwe-watermark 'Copyright' (isithombe-skrini esingenhla). Empompini i-watermark isuka kokumpunga / engasebenzi iye kokuluhlaza okwesibhakabhaka / okusebenzayo / okugqanyisiwe / okunophawu oluhlaza okwesibhakabhaka ngaphambili ukukhombisa ukuthi i-watermark manje iyasetshenziswa. Thinta inkinobho ethi 'Kwenziwe' ukubuyela esikrinini esikhulu (ngezansi) futhi manje uzobona leyo watermark ye-copyright ekhasini le-Canvas.
4. Yilungise ngokuthinta nokushukuma komzimba (ngenhla). Noma iya kuzilungiselelo ngokuchofoza kabili ku-watermark noma ngokuthinta isithonjana sezilungiselelo (ngenhla).
OKUBALULEKILE: Isibonelo esingenhla sisebenzisa i-watermark eyi-1 kepha i-iWatermark + ayivumeli i-1 kuphela kepha ikhetha ama-watermark angu-2, 3, 4… noma ngaphezulu ngasikhathi sinye.
5. Esikrinini esikhulu chofoza inkinobho yokwabelana kubha ye-nav ukuze wabelane ngesithombe sakho sokuqala esine-watermark. Ku-iOS 13. Kubukeka kanjena. Thepha okuthi 'Gcina isithombe' ukuze ulondoloze 'Okwakamuva' kodwa futhi naku-'Watermark + Ifolda 'ngasikhathi sinye.
Yebo! Usanda kubheka isithombe sakho sokuqala kalula. Kodwa linda! Qhubeka ngokulandelana ngokwenza ngesandla noma uthephe ku- iya ngqo ekwakheni i-watermark yakho yokuqala.
ICanvas yikhasi lokuqala olibonayo ekufakeni i-iWatermark +. Ukubuka kuqala kwesithombe nalapho ungahlela khona futhi ubuke ama-watermark ahlukahlukene ofuna ukuwasebenzisa. Ukwabelana ngaleli khasi kuthumela izithombe zakho ezinamanzi amaningi. Ngezansi kwekhasi kune-Navigation Bar.
Thepha bese uhudula i-watermark ekhasini le-Canvas. ISU: Uma i-watermark incane kakhulu uma uyithepha kanye uma ungayithepha bese uyihudulela kude.
Sebenzisa ingcosana kanye / noma ukusondeza ukushintsha usayizi we-watermark.
Ukushintshanisa i-watermark faka isithupha nomunwe wangaphambili ku-watermark bese usonta.
Thinta kabili i-watermark ukuya ngqo kuzilungiselelo zaleyo watermark.
Khulisa indawo eyisikwele esincane sendwangu ngokuthinta bese ucindezela (obizwa nangokuthi i-3d touch).
Ngezansi kwekhasi kukhona 'i-Navigation Bar'.
Ngezansi kwekhasi le-Canvas kunale bha yokuzula. Isithonjana ngasinye esiku-navbar sikuyisa ekhasini elibheka ingxenye eyodwa ye-watermarking.
Izinto ezingenhla ngokulandelana zibizwa ngezansi:
Khetha Imidiya | Imininingwane | Uhlu lwe-Watermark | Izilungiselelo | Ukwabelana | Usizo
Ibheji 2 kusithonjana sesitembu ibonisa inani lama-watermark akhethwe njengamanje.
Isithonjana sokwabelana sizokhombisa nebheji yenani lezithombe ezilungele ukwabiwa.
Uma uthinta isithonjana se- 'Khetha Imidiya'
le ngxoxo yokungenisa isithombe, izithombe, ividiyo, ukunamathisela isithombe noma ukungenisa amafayela (ifu) iboniswa ngezansi.
Lapha lapho ungakhetha khona ukuvula isithombe, iqoqo lezithombe, ividiyo, ukuthatha isithombe, ukunamathisela isithombe noma ukungenisa ifayela. Imininingwane kulokhu okungenhla, ngezansi.
Khetha isithombe - yisikhethi se-Apple sokukhetha isithombe esingu-1
Khetha izithombe - isikhi sethu sezithombe esivumela ukukhetha iqoqo lezithombe. Thepha okukodwa bese uhudula ukuze ukhethe ngokuqhubekayo. Noma thepha kanye esithombeni sokuqala nakabili kokugcina ukuze ukhethe konke okuphakathi (kuyasiza kakhulu).
Namathisela isithombe - kuvela kulokho okukopishe ngaphambilini.
Ngenisa Ifayela - (kwi-iOS) ivula i-Apple 'Files' App ukuvumela ukukhetha kumasevisi wefu afana ne-iCloud, iDropBox, i-OneDrive, i-Google Drayivu, njll. Udinga ukuthi ube nalawo mafayela angawodwana kudivayisi yakho ongawalanda kulawo masevisi.
Khetha Ividiyo - ivumela ukukhetha ividiyo ye-watermarking.
Khetha Izithombe ozozisusa - indlela enhle / elula yokususa izithombe ku-iOS. Thepha isithombe bese uya esithombeni sokugcina bese uthepha kabili ukuze ukhethe zonke izithombe kusuka kokokuqala okuthethwe kokuthepha kabili. Thepha kudoti ongakususa ukuze ususe konke. Qaphela.
ISU: - Ku-'Khetha Izithombe 'ukukhetha izithombe eziningi: thepha nesithombe bese uya esithombeni sokugcina bese uthepha kabili ukuze ukhethe zonke izithombe kusuka kokokuqala okuthethwe kokuthepha kabili. Kuyashesha / kuyashesha bese uzama ukususa izithombe nganoma iyiphi enye indlela.
ISU - Dala ifolda entsha: Ngokuzenzakalelayo iWatermark + idala ifolda yayo «iWatermark +». Yigama elingaguqulwa kokuthi Okuncamelayo (sincoma ukulishiya linjalo).
Ku-Mac izinhlobo zamafayela zibaluleke kakhulu ukuqondwa. Ku-iOS i-Apple yenze isinqumo sokuyigcina ilula futhi ingakhombisi izandiso zefayela noma izinhlobo zamafayela. Kepha kuma-watermarking abantu badinga ukwazi uhlobo lwefayela abenza ngalo i-watermarking. Kubaluleke kakhulu lapho kungeniswa i-logo (okumele ibukeke kahle kakhulu kufanele ibe yi-.png). Ngakho-ke, sengeze ikhono lokubona kalula izandiso zezithombe ku-iWatermark +
Ungazibona Kanjani Izandiso Zefayela: Thepha isithonjana semidiya, qiniseka ukuthi 'Khetha izithombe (ngolwazi) ' ukubona izithonjana ezibonisa uhlobo lwefayela, hhayi okuthi 'Khetha isithombe'.
Thepha u-ⓘ phezulu ngakwesokudla. Qaphela izinhlobo ezahlukahlukene zefayela, i-heic, i-jpg, i-png, i-dng, i-gif, njll. Ziyabonakala kusithombe-skrini esingezansi phezulu ngakwesokunxele kwesithonjana ngasinye. Thepha u-ⓘ futhi ukuze ujikeleze usayizi wesithombe, isikhathi / usuku lokudala isithombe. Imininingwane ewusizo lokho kuphela itholakala kusikhi sesithombe esiningi hhayi kusikhi sesithombe esisodwa. Yebo, ungasebenzisa isikhi esiningi ngezithombe ezizodwa. Abanye benu bazobuza, "Kungani kukhethi lesithombe eziningi kuphela?" Isizathu ukuthi sizenzele isikhethi sezithombe eziningi thina kanti isikhethi esisodwa senziwa yi-Apple.
Ukushukuma komzimba kuyatholakala ekhasini lokukhetha isithombe
Ku-'Khetha Izithombe 'ukukhetha izithombe eziningi: thepha nesithombe bese uya esithombeni sokugcina bese uthepha kabili ukuze ukhethe zonke izithombe kusuka kokokuqala okuthethwe kokuthepha kabili.
Ngesithombe esikhethiwe thinta
, Isithonjana sesi-2 ukusuka kwesobunxele kubha ye-nav, ukubuka imininingwane yezithombe. Lapha uzobona amathebhu weFayela, i-Image, i-Credits, i-StegoMark nenkinobho yeMetadata.
Ifayela - igama, elenziwe, usayizi, incazelo namagama asemqoka avela kwimininingwane ye-IPTC uma ikhona. Idatha ye-GPS uma okukhona kuxazululeka kumephu.
Isithombe sikhombisa imininingwane ye-EXIF kusuka kukhamera.
Amakhredithi - aqukethe idatha engezwe ngumsebenzisi uma efakwe lapho yi-PhotoShop, i-Lightroom noma i-iWatermark.
I-StegoMark - ukufunda i-StegoMark eshumekiwe. Okokuqala vula isithombe nge-StegoMark. Uma wena noma omunye umuntu esebenzise i-StegoMark esithombeni bese ufunda umyalezo owuqukethe iya kule phaneli bese ufaka iphasiwedi noma iphasiwedi (uma idalwe ngaphandle kwephasiwedi) ukuveza umbhalo womyalezo. Ayikho iphasiwedi esho ukuthi noma imuphi umsebenzisi we-iWatermark + angawuthola umyalezo. Uma usufake iphasiwedi uma kunokuchofoza okukodwa inkinobho ethi 'Thola' ukudalula umlayezo wombhalo.
Imethadatha - inkinobho ephezulu kwesobunxele ye-EXIF, IPTC, njll.
Imininingwane yobuchwepheshe emayelana nesithombe (i-EXIF) idalwa yikhamera. Imininingwane yokuqukethwe (IPTC / XMP) idalwa futhi yengezwa nguwe, umthwebuli zithombe. I-EXIF, i-IPTC, i-TIFF, i-XMP yizo zonke izinhlobo ezahlukahlukene zokugcina imininingwane ezithombeni. Zivele ngokuhamba kwesikhathi. Ukuze ufunde kabanzi ungasebenzisa iziphequluli zakho ukuthola eminye imininingwane.
Amavidiyo nawo anemininingwane. Uma ividiyo isikrinini esikhulu chofoza inkinobho ethi
isithonjana ukuthola imininingwane ngevidiyo.
Ithebhu 'yevidiyo' ikhombisa imininingwane yezobuchwepheshe kuleyo vidiyo.
Uma i-watermark yemethadatha yenziwa (ngezansi) futhi isetshenziselwa uku-watermark ividiyo ngalolo lwazi.
Lapho-ke leyo vidiyo ingenisiwe izovela ngaphansi kwethebhu 'yama-Credits' yolwazi lwevidiyo kanjena:
Ikhasi lohlu lwama-Watermark kulapho ungakhetha khona ukudala ama-watermark amasha (phezulu) bese ugcina sonke isibonelo nama-watermark wakho wangokwezifiso (ngezansi ngezansi). Ama-watermark noma ama-watermark akhethwe kulolu hlu lwe-Watermark avela ekhasini le-Canvas. Kusuka ekhasini lohlu lwama-Watermark ungakhetha, uphindaphinde, ususe, uphine, ungenise futhi uthumele ama-watermark.
Thepha u-'Hlela 'phezulu ngakwesokunxele bese uthepha uhudula isithonjana sokuhudula ngakwesokunene phezulu noma phansi ukuhlela kabusha ukuhleleka kwe-watermark ngayinye. Noma susa ama-watermark ngokuthinta ibhola elibomvu ohlangothini lwesobunxele.
Thepha ingilazi yokukhulisa (phezulu) ukusesha ama-watermark ngamagama.
Ngaphezulu thepha u - '+ Dala i-watermark entsha' noma isithonjana se- + ngezansi. Lokhu kukuyisa ekhasini le-'New Watermark '(isithombe-skrini sesibili ngenhla). Ngemininingwane engaphezulu ekwakheni i-watermark entsha, thepha isithombe-skrini esingezansi.
Thepha isithonjana seso kubha engezansi ye-nav ukuze ubuke kuqala i-watermark esithombeni sakho.
Thepha -> | ukuhambisa ngokushesha ku-watermark elandelayo egqanyisiwe.
I / icon ayikhethi wonke ama-watermark akhethiwe. Ishintshela ku…
Isithonjana kubha engezansi ye-nav ungathepha ukuze ukhethe kabusha ngokuzenzakalela wonke ama-watermark akhethwe ngaphambilini.
“Ungakhethi Wonke ama-watermark” / “Khetha ama-watermark emuva” - indlela esheshayo yokukhetha ukukhetha wonke ama-watermark. Futhi ukuzikhethela emuva kokuthinta okukodwa. Lezi zenzo zibalwe phezulu kakhulu ekhasini le-Watermark, nakubha yamathuluzi.
Thepha okukodwa ohlangothini lwesobunxele lwe-watermark ongayikhetha, okuyi-checkmark nokuyigqamisa ngokuluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuze ukhethe ukukhetha ukuthepha futhi ohlangothini lwesobunxele.
Khetha ama-watermark amaningi ngokuthepha kwenye ukuze uyikhethe futhi.
Thepha okukodwa kusithonjana sezilungiselelo
noma noma ikuphi kokuthathu okulungile kwe-watermark, ukuya ekhasini lezilungiselelo zaleyo watermark.
Thepha noma yikuphi ngakwesobunxele kokuthathu kokungu-watermark ukuze ukhethe.
Thepha kabili i-watermark iyayikhetha bese ukhetha zonke ezinye bese ikuyisa ekhasini lokubuka kuqala.
Thepha bese uslayida i-watermark kwesobunxele ukuze ubonise izinkinobho ze- “Pin / Un-pin / Delete / Duplicate”. Iphini liqinisekisa ukuthi i-watermark ayinakukhethwa.
Phezulu kohlu 'lwe-Watermark' yi-'Yakha i-Watermark Entsha '. Thepha lokhu bese ukhetha ukudala uhlobo lwe-watermark olubonwe ngezansi.
Funda ngohlobo ngalunye lwe-watermark ngenhla ku 'Izinhlobo ze-Watermark' ingxenye.
Q: Ngiyilondoloza kanjani i-watermark noma ama-watermark?
A: Thepha lapha ufunde yena
Q: Ngiyiphinda kanjani i-watermark?
1) Ukushintsha igama kwanoma iyiphi i-watermark kuzokulingisa. Ukuhlola ukufaka u-2 ngemuva kwegama, hit hit, manje usune-watermark entsha efana ncamashi neyakudala.
2) Ekhasini le-Watermark slayida i-watermark kwesobunxele ukuze iveze izinkinobho zokuphina, eziphindiwe nokususa.
Pin - phina i-watermark ngakho-ke ivuliwe (njalo kukhethwe) ngaso sonke isikhathi. I-watermark manje izokhombisa isithonjana esincane sephini ngakwesokudla. Ukuyikhetha futhi ngeke kuyicishe. Lokhu kwenzelwa ama-watermark owafunayo ngaso sonke isikhathi futhi awufuni ukucisha ngengozi. Ukuze ushintshe isilayidi uphinde ukhethe u-'Ungaphini '.
okubili - ithatha i-watermark oyithandayo bese iyakha. Ngemuva kwalokho ungasebenzisa njengesiqalo se-watermark entsha.
Susa - isusa i-watermark ngokuphelele. Akubuyiswa.
ISU: ukuma kwezwe (ngezansi) kususa isimo (isithwali, isikhathi, ibhethri) phezulu, kunikeze isikhala esithe xaxa.
Ividiyo esheshayo engezansi ikhombisa ukuthi yenziwa kanjani. Kule vidiyo ibhekisa ku-'Khiya 'sishintshe igama laba ngu-'Pin'.
Shintsha izilungiselelo ze-watermark nge-watermark yokugcina ekhethiwe. Isithonjana sokusetha kokuthinta
ekhasini eliyinhloko ukuya ekhasini lezilungiselelo le-watermark ekhethiwe manje. Ungaphinda uthephe kabili i-watermark ekhasini eliyinhloko ukuya kuzilungiselelo zaleyo watermark futhi.
Yabelana / Thumela
OKUBALULEKILE: I-Apple ivumela izinto eziningi ukuthi zabelwe ku-Ikhamera Album kepha kuphela into engu-1 ngasikhathi esandisweni Sokwabelana. Ukuqhutshwa kweqoqo kuphela ku-albhamu yekhamera ye-Apple.
Ukwabelana kuvumela ukuthekelisa izithombe zakho ezi-watermark kanye nevidiyo ngokusebenzisa izandiso nge-imeyili, gcina ku-albhamu yekhamera, i-airdrop, ukuphrinta, ikhophi, i-Instagram, i-Facebook, i-Twitter, njll. I-Dropbox, i-Tumblr, i-Pinterest, i-Evernote, i-Buffer, i-LinkedIn njll usebenzisa isici sokunwebelana nge-iOS 8. Ukwabelana ngezandiso kufakwa kuzinhlelo zokusebenza futhi kuvumela ukwabelana ngamafayela kuleyo sevisi. Isibonelo landa iPinterest uyise efonini yakho futhi manje uzothola ukuthi ungabelana kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-iWatermark + noma Izithombe ngqo kwi-akhawunti yakho ye-Pinterest. Kuyafana ngeTumblr, i-Evernote nezinye izinsizakalo ezizenzele uhlelo lwazo lokusebenza ngokwakhiwa kokwabelana okwandisiwe.
Esikrinini-skrini ngenhla sazi ukuthi kunezinketho zokwabelana okuvela eceleni, i-Instagram, i-Facebook, iTumblr, iPinterest, i-Evernote, iHootsuite, iBuffer kanye nenani elikhulayo lezinhlelo zokusebenza zokwabelana ezisekela lokhu kushintshaniswa kolwazi. Skrolela kwesokudla ukuze ubone okuningi. Ngakho-ke, izandiso zokwabelana ezitholakalayo zincike kuziphi izinhlelo zokusebenza ozifakile.
OKUBALULEKILE: Ulahlekile isandiso sokuthekelisa? Uma unokwandiswa kokuthekelisa okufana ne-Instagram, Tumblr, Evernote, Buffer, njll futhi awukuboni ohlwini bese upheqa uze uye kwesokudla bese uthinta isithonjana se- 'More…' lapho ungavula khona sebenzisa, cisha lezo ongazenzi bese uhlela kabusha uhlu.
Instagram - landa uhlelo lokusebenza lwe-Instagram ne-iWatermark + izolikhombisa endaweni yokwabelana / yokuthumela engenhla. Thatha isithombe esiyisikwele kuhlelo lokusebenza lwekhamera le-Apple. I-Watermark ku-iWatermark + bese ukhetha i-Instagram endaweni yokwabelana (ngenhla) futhi izothatha isithombe esine-watermark ngqo ku-Instagram lapho ungafaka khona izihlungi bese ulayisha ku-Instagram. IWatermark + yindlela elula yokubuka isithombe esenzelwe i-Instagram.
I-PROBLEMIphepha lesheya elithi 'Copy to Instagram' aliveli. Sithumela amafayela ane-watermark ngohlobo angena ngalo. Uma ungenisa ifayela le-.heic i-iWatermark + ithumela ngaphandle ifayela le-watermark. 'Kopisha ku-Instagram' akuveli ngaphandle kokuthi ifayela elithunyelwa ngaphandle yi- .jpg.
SOLUTION: Sebenzisa i- .jpg ukuze ubone i-'Copy to Instagram 'kuspredishithi. Zama futhi uzobona ukuthi 'Kopisha ku-Instagram' kukhona. Sicabanga ukuthi i-Instagram izovuselela uhlelo lwayo lokusebenza ukuvumela ukusetshenziswa kwamafayela we-heic kusuka kushidi lokwabelana.
Ukwabelana nge-Facebook kwakhelwe ku-iOS. OkweFlickr, i-Twitter, i-Evernote, iTumblr, iBuffer landa lezo zinhlelo zokusebenza ukuze zibonakale zizosetshenziswa endaweni yokwabelana.
'I-Share Extension "ivumela ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthi zinikeze izinketho ezintsha zokuthekelisa ku-iWatermark +
Ngenkathi i-'Photo Editing Extension 'yangaphambilini ivumela izinhlelo zokusebenza ezihlela izithombe ezithombeni ze-watermark zisebenzisa i-iWatermark +.
? / Mayelana / Izintandokazi
Ekhasini eliyinhloko thinta i-? icon ngezansi kwesokudla ukufika kule navbar ezansi:
Mayelana - inkampani, abahleli, imininingwane yenguqulo, thumela kumngani futhi ukale lolu hlelo lokusebenza.
Ukusekelwa kwe-Tech - ungasithinta kanjani ngeziphakamiso, izimbungulu nemibuzo engaphendulwanga kule ncwajana.
Okuncamelayo - Lokhu kungcono kakhulu ukushiya njengoba kunjalo ngaphandle uma uziqonda ngokuphelele. Lokho kusho ukufunda indawo engezansi. Uma ufuna ukuwashintsha abuyele kuzilungiselelo zokuqala bese ushaya inkinobho Yokuzenzakalelayo phezulu kwesobunxele.
0. Okuzenzakalelayo - Thinta lokhu ukubuyela kuzilungiselelo zokuqala ezizenzakalelayo
1. Ikhwalithi yokubuka kuqala ye-Retina - iWatermark + isebenzisa izithombe ezingena esikhundleni sokulungiswa okuphansi ukukhombisa ngejubane elikhulu. Ukuvula lesi silungiselelo kuzonikeza izithombe ezihlabayo kusikrini ezisisekelayo kepha kuthatha inkumbulo eningi. Ukusetha, ukuvala noma ukuvala, akuguquli ikhwalithi yokuthekelisa ekhwalithi ephezulu njalo.
2. Susa indawo ye-GPS - isusa idatha yendawo ye-GPS enamathiselwe esithombeni. Imethadatha ye-GPS yiyo evumela ukubeka izithombe emephini kuzinhlelo zokusebenza eziningi. Kusho nokuthi uma wabelana ngesithombe abantu bangafunda leyo mininingwane ukuze babone ukuthi ubukuphi. Lokhu kwesinye isikhathi kukhathazeka ngokuphepha. Isibonelo isithombe owabelana ngaso ku-inthanethi sinemethadatha ye-GPS ekhombisa eyakho eYurophu izolo, lokho kusho ukuthi awukho endlini yakho e-Iowa namuhla ngakho-ke kumgqekezi lokhu kungaba ulwazi oluwusizo. Uma lokhu kuyinkinga, ukubeka lokhu okuthandayo kuzosusa yonke idatha ye-GPS kuzo zonke izithombe ezithunyelwe kusuka ku-iWatermark +
3. Ukucindezela vs ukulungiselelwa kwekhwalithi - Inombolo ephakeme izothumela ikhwalithi ephezulu nosayizi omkhulu. Inombolo engezansi ithumela ikhwalithi ephansi nosayizi wefayela omncane. Inombolo ezenzakalelayo inikela ngakho konke okuhle. I-iWatermark + isebenzisa amathuluzi / i-api efanayo ekucingeni kwe-.jpg njenge-Photoshop nezinye izinhlelo zokusebenza. Uma uthatha isinqumo sokushintsha lokhu qiniseka ukuthi uyakuqonda ukucindezelwa kwe-jpg, usayizi wekhwalithi vs ama-tradeoffs abandakanyeka ngokucwaninga online.
4. Nciphisa - le ikhodi yethu yokuphathelene nezithombe ezinciphayo ngenkathi kugcinwa ikhwalithi ephezulu kakhulu ngokubukeka. Isebenza kahle kepha ihamba kancane, mhlawumbe ihamba kancane ngokuphindwe kabili.
5. Kuthunyelwe Usuku Lwefayela - lokhu kusetha usuku lwefayela kufayela elithunyelwa ngaphandle ngokuzenzakalela kufana nefayela lokuqala. Lokhu kugcina ukuhleleka kohlobo.
6. Thumela igama le-albhamu yekhamera - setha igama lefolda / i-albhamu iWatermark + ethuthelwa kuyo ku-Ikhamera Album. Futhi kubonakala kuhlelo lokusebenza lwezithombe ze-Apple.
7. Checkers Ukugqama - shintsha ukugqama kwesizinda sabahloli ekhasini le-'Canvas '.
8. Ukukhulisa ileveli yokusondeza ingilazi - setha ileveli yokusondeza yengilazi yokukhulisa ekhasini le-Canvas. Thinta bese ubamba ukuze ubone ingilazi yokukhulisa.
9. Ukugqama Kwokuskena Isiginesha - lokhu kushintsha imedian ezenzakalelayo yokuthi yimuphi umbala we-pixel othathwa njengombala omnyama noma omhlophe kuma-watermark Esiginesha amasha.
10. Dlala Imisindo Yempendulo - dlala imisindo uphendula imicimbi.
11. Dlala 'Impendulo ye-Haptics' - ama-haptis ukudlidlizela okwenzeka ngokusetha into yomsebenzisi noma umcimbi njengokuhlanganyela. Lokhu kuqinisa umuzwa wokulawula okubonakalayo.
12. Xwayisa ngamagama ejwayelekile e-watermark - ekwakhiweni kwe-watermark entsha kunesixwayiso sokwenza igama lefayela elichazayo. Lokhu kulungiselelwa kuvala isexwayiso.
13. Sebenzisa i-Apple OS Color Picker - lokhu kuguqula isikhombimsebenzisi sokukhetha imibala kusuka kokwethu (okuzenzakalelayo) kuye kwe-Apple nangemuva.
14. Impendulo Yomhloli Owengeziwe - uma lesi silungiselelo sikhona singeza imininingwane yobuchwepheshe nesithombe osivulile. Sifinyelele ku-Tech Support kusuka phezulu kwebhukwana ku-nav bar & ngokuthepha ku-'Tech Support '. Ukuthumela i-imeyili ngale ndlela kusiza uhlelo lwethu oluqinile kodwa oluhlanyayo ukulungisa iziphicaphicwano / izimfihlakalo ezingcwatshwe kuma-iOS ukudala izinhlobo ezintsha nezesabekayo ze-iWatermark +
IWatermark inezinhlobo eziyi-12 ezinkulu zama-watermark, umbhalo, umbhalo we-arc, i-bitmap, i-vector, umngcele, isiginesha, i-QR, imethadatha, i-StegoMark, yenza usayizi, isihlungi sangokwezifiso nezinketho zokuthekelisa. Sizoqala nge-Text Watermark futhi siyisebenzise njengesibonelo ukubonisa zonke izilungiselelo.
Ngaphambi kokuqhubeka kubalulekile ukuqonda ukuthi uhlobo ngalunye lwe-watermark lunekhasi lezilungiselelo, uhlobo ngalunye lwe-watermark lunezilungiselelo zalo nokuhlelwa kwalo ngokufana nabanye. I-'Watermark Watermark 'inezilungiselelo eziningi kakhulu ngakho-ke ithola izincazelo eziningi zamasethingi endaweni eyodwa.
Ama-watermark wombhalo kulula ukudala. Umbhalo ubukhali kunoma yisiphi isayizi futhi uncike kumafonti atholakalayo. IWatermark + inikeza ukufinyelela kwamafonti amahle angama-292.
Ukuqala, ekhasini eliyinhloko, thinta uphawu lwesobunxele kakhulu bese ukhetha isithombe njengesizinda sokusiza ukudala nokubuka i-watermark yakho. Ngemuva kokudala i-watermark ungayisebenzisa ezithombeni ze-watermark.
1. Thinta umbhalo… into ephezulu ekhasini lezinhlobo ze-watermark (ekhonjiswe ngezansi).
2. Lokhu kuzoholela ekhasini lezilungiselelo ze-Text Watermark. Lapha gcwalisa igama nombhalo.
3. Izilungiselelo zimpunga uze ushaye u-'Kwenziwe 'kanye nje. Lokho kuzokwenza ukuthi izilungiselelo ezingezansi zisebenze futhi ungalungisa isikali, i-opacity, njll. Uma ushaya u-'Kwenziwe 'kabili uzobuyela esikrinini esikhulu lapho ungakhetha khona isithonjana sezilungiselelo zaleyo watermark ukuthi ibuye.
Lungisa izilungiselelo ezifana nale vidiyo.
Lungisa izilungiselelo ngokubuka kuqala kwesikhathi sangempela.
OKUBALULEKILE: Zonke izilungiselelo ziyasebenzisana njengoba kukhonjisiwe kuvidiyo engenhla. Lokho kusho ukuthi uma uslayida isilayida sosayizi ukushintshela kokubuka esithombeni ukuze ukwazi ukuhudula uye emuva naphambili ukubona nokukhetha usayizi oqondile owufunayo. Thinta isilayidi bese ubamba ukuhambisa uye emuva naphambili uze ubone umphumela owufunayo bese uyeka. Lokhu ukuvumela ukuthi usethe usayizi, i-opacity, njll bese ubona ngokushesha imiphumela yokulungiswa kwakho esithombeni.
Izilungiselelo ezikusithombe-skrini esingenhla zichazwe ezihlokweni ezingezansi.
Thayipha igama le-watermark. Inkinobho ephezulu ngakwesokudla izoshintshela ku-'Qamba kabusha '. Thepha ukuqamba kabusha ukuqeda ukuqamba i-watermark. Amagama acacile, achazayo angcono kakhulu. Kukusiza ukuthi ubathole kamuva. Manje, uma ufuna ukushintsha igama futhi, inkinobho ephezulu ngakwesokudla ishintshela ku-'Duplicate 'bese uthinta kuyo izokubeka empinda yaleyo watermark yangempela.
Thayipha okuqukethwe kombhalo wakho. Ukwenza umbhalo wemigqa eminingi uthinte inkinobho ethi 'Umugqa Omusha' obonwe ngezansi ngakwesokudla ngaphezulu kwekhibhodi. Ukuhlelwa okusha okubizwa ngokuthi 'ukuqondanisa' kuyavela. Khetha Kokwemvelo, Kwesobunxele, Maphakathi Nesokudla futhi kuzoqondaniswa kanjalo lapho kubukwa esithombeni esikrinini esikhulu. Ukususa wonke umbhalo chofoza kusithonjana se-x kwesokudla senkambu yombhalo. Faka i-Tag kubalulekile chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi.
Khetha eyodwa yamafonti amaningi atholakala ku-iWatermark. Umbhalo nefonti kuboniswa kubuso befonti bangempela, i-wysiwig (okubonayo yilokho okutholayo).
Hlola kuqala ifonti ngqo ku-watermark yakho esithombeni sakho ngokuthinta bese ubambelela esweni elincane
Amafonti nemibala oyisebenzisayo ngaso sonke isikhathi kungathandwa ngayo ukufinyelela ngokushesha. Chofoza kufonti oyithandayo ukushaya inhliziyo ukuvula isithonjana esihlaza okwesibhakabhaka futhi ishintshela eshidini elisha bese ingeza ifonti lapho. Thepha inhliziyo noma kunini ukuze ubone izintandokazi zakho.
Thepha isithonjana sedayisi ukushintsha ifonti ngokungahleliwe bese ubona khona manjalo ukuthi ibukeka kanjani.
Izithonjana zomcibisholo wokubuyela nokudlulisela phambili zikubuyisela emuva futhi zidlulise phambili ngamafonti angahleliwe.
ISU: Sebenzisa inkambu yokusesha ephezulu ukusesha ngamagama (kulula lapho uskrolela amafonti angama-300) noma izinhlobo zamafonti ezinjenge- “mono” noma ”iskripthi” nezinhlobo zolimi lwefonti ezifana ne- “Indian”, “Russian”, “Japanese”, “ IsiKorea "," isiThai "kanye" nesi-Arabhu ".
Uma uthanda ifonti (ngenhla) iyibeka kule phaneli yamafonti oyithandayo. Lokhu kukuvumela ukuthi ube nefonti oyithandayo kuzeluleko zakho zomunwe. Akusekho ukuskrola ngokusebenzisa amakhulu amafonti.
Thinta bese uhudulela isilayida emuva naphambili ukuze uthole usayizi ofanele. Ncinza futhi usondeze i-watermark esithombeni nayo ingasetshenziswa uma empeleni usekhasini eliyinhloko.
ISU: Ukuthayipha usayizi enkambeni esiseduze nesilayida kunganikeza usayizi kusuka ku-0 kuye ku-150%. Ngenkathi isilayida sivumela kuphela ukuhudula phakathi kuka-0 kuye ku-100%. Kungenzeka futhi ukuthayipha ama-decimals afana no-75.5 ngosayizi oqondile.
Hudula isilayida ukuze uzungezise i-watermark. Noma thayipha inkambu yonke (isb. 14) noma idesimali (isb. 14.5) inamba enkambu. Kungenzeka futhi ukushintshanisa i-watermark kusuka ekhasini eliyinhloko. Beka iminwe emi-2 ku-watermark bese uyisonta ukuze uzungeze.
Setha ukukhanya / ukubonakala kwe-watermark. Okusobala okungakwesobunxele nokungakwesokudla.
Setha umbala we-watermark kalula ngokuthepha umbala.
Hlela Amasethingi Wombala - Ukubona zonke izinketho ezingenhla thepha ukuhlela phezulu ngakwesokudla noma isithonjana samasethingi ezansi ukuhlela umbala. Amanani we-RGB noma we-HSL njengo-0..255 amanani aphelele, noma njengo-00..F hexadecimals. (ngezansi).
Izintandokazi - Ngezansi thepha isithonjana senhliziyo ukuya ekhasini lezintandokazi. Thepha iseli ukuze unikeze lowo mbala kulelo seli.
I-Eye Dropper - Thepha isithonjana sakhe ukuze uye ekhasini le-Canvas bese usebenzisa isikhungo sengilazi yokukhulisa ukukhetha umbala esithombeni sakho. ISU: Sincoma kakhulu ukusebenzisa lokhu ukukhetha umbala we-watermark ocashile. Isibonelo isithombe sakho singase sibe nokushona kwelanga phezu kolwandle oluhlaza okwesibhakabhaka nezintaba kwesokudla. ungakhetha omunye wemibala yegolide yokushona kwelanga ongayisebenzisela i-watermark yakho ohlangothini olumnyama mnyama ezintabeni. Lokhu kususa ukwethula umbala omusha sha esithombeni okungaphazamisa ukuvumelana nobuqotho bawo. Okucashile kuhle kuma-watermark. Akunasidingo sokubamba abantu ngamehlo.
I-Radomize - ngakwesobunxele se-eye-dropper isithonjana sedayisi. Thepha lokho bese uthola umbala ongahleliwe. Lokhu kufana nje ekhasini lefonti lapho isithonjana se-radomize senza into efanayo ngaphandle kwamafonti.
Nayi ividiyo yeminye yaleyo mininingwane.
OKUBALULEKILE: Kukhona abacoshi bemibala aba-2 okuchazwe ngenhla futhi okubonakala njengesikhi sombala esizenzakalelayo. Okunye kungabonakala ngokushintsha okukodwa kokuncamelayo okubizwa ngokuthi, 'Sebenzisa i-Apple OS Colour Picker'. Vula lokho bese ubuyela kusikhi sombala kunoma iyiphi i-watermark futhi uzobona i-Apple oyibona kuzinhlelo zokusebenza eziningi. Ukuzikhethela kungokwakho.
Akukho - kuvumela ukukhetha umbala wombhalo
Qopha futhi uqhafaze - imiphumela enokubonakala okungakhethwa. Zombili zenzela ama-watermark amahle futhi acashile.
Uma ukucaca kungavaliwe imiphumela emihle iyatholakala lapho umbala wombhalo umhlophe noma unombala okhanyayo. Lapho umbhalo umnyama noma umnyama, kuncane kakhulu uma kukhona umehluko obonakalayo phakathi kokuqoshwa, ukufaka emboss nokungabikho.
Setha umbala nokukhanya kwesithunzi se-watermark.
Valiwe, Qopha noma Emboss imiphumela. Itholakala kuphela kuma-watermark ombhalo ne-Arc. Imiphumela emihle iyatholakala lapho umbala wombhalo umhlophe noma unombala okhanyayo. Lapho umbhalo umnyama noma umnyama, kuncane kakhulu uma kukhona umehluko obonakalayo lapho i-fx ivuliwe noma icishiwe.
Khetha umbala nokukhanya kwesizinda esiyisikwele eduze kwe-watermark.
Uma ungumsebenzisi wokuqala, thinta bese uhudula i-watermark ukushintsha indawo yayo kunokwanele ezimweni eziningi kepha ukusethwa kwesikhundla noma ukuthayipha kuvumela ukucacisa okwengeziwe.
FYI: Isikhundla silinganiselwe ku-iWatermark +. Isikhundla sento sinqunywa ngo-% kusuka emaphethelweni. Lokho kusho ukuthi noma ngabe usayizi noma umumo wesithombe onjani uzothola imiphumela ebonakalayo. Usayizi / isikhundla se-Watermark sithinteka ubukhulu bezithombe. I-watermark izobekwa endaweni efanayo esithombeni ngasinye kungakhathalekile ubukhulu nosayizi wesithombe ngasinye kuqoqo. Isibonelo: kunqwaba yezithombe ezi-2, esisodwa siphansi nesinye isixazululo esiphakeme, i-watermark yomngcele isethwe ukuba ibe ngamaphikseli ayi-10 ububanzi esithombeni esisodwa sokuxazulula okuphansi kungenzeka uma kulinganiswa kube ngamaphikseli angama-20 ububanzi esithombeni sokucaca okuphezulu. Lesi ngesinye futhi isici esisemqoka esenza iWatermark + ihluke futhi ithokoziswe abathwebuli bezithombe abangochwepheshe.
Isikhundla se-watermark singasetwa ngezindlela ezi-3:
Thepha bese uhudula i-watermark ekhasini le-Canvas.
Ngokuthinta ngombhalo ogqanyisiwe ophambene negama elithi 'Isikhundla'. (Umbhalo Kwesobunxele-Phansi, Kwesokudla-Phezulu, njll. Bona isithombe-skrini ngezansi) noma uthinte kabili isithonjana sephini.
Ngokulawula okuqonde ngokwengeziwe (nge-pixel) ngaphezulu kwethebhu yendawo ye-watermark kuNudge ezansi.
Ngemuva kwalokho ekhasini le-Canvas uzobona lokhu:
ongayisebenzisa ukugudluza i-watermark ezungeze ngama-increments amancane.
Uma uhambisa i-watermark endaweni uyayiphina lapho. I-watermark ephiniwe ikhonjwe kwesobunxele, maphakathi noma kwesokudla nangaphezulu, maphakathi nangaphansi. Ku-skrini engezansi i-watermark ise-'Left 'ne' Top '.
Khetha ikhona eliphiniwe. Chofoza Kwesokunxele, Phakathi, noma Kwesokudla naPhezulu, Maphakathi noma Phansi.
ISUIndawo okuma kuyo i-watermark ikhonjiswa yizithonjana ezipinki ezimhlophe okwesibhakabhaka ekhasini lesithombe lokubuka kuqala (bheka ngezansi). Zama ukuhambisa i-watermark ngomunwe wakho bese ubona isithonjana se-pin sihambisa kwamanye amakhona njengoba usondela kubo. Thinta kabili iphini ukuya kuzilungiselelo zesikhundla.
Kungokwamacala akhethekile lapho ufuna ukubeka khona i-watermark esithombeni sonke izikhathi eziningi okwenza kube nzima ukuthi abantu bakopishe noma basebenzise izithombe zakho ngokunqampuna. Vula ngokuswayipha iswishi yokuqala ku-Isikhundla esiboniswe kusithombe-skrini esingenhla. Shintshela kokuluhlaza ukuze uthayiphe.
Izilungiselelo zokuthayela zisobala impela. Hambisa izilayida bese ubheka kuqala izinguquko ngokushesha.
Usayizi - ukunciphisa / ukukhulisa usayizi kukhombisa amakhophi amaningi / ambalwa waleyo watermark esithombeni.
Igebe - igebe phakathi kwekhophi ngalinye.
I-Offset evundlile - ihambisa wonke amakhophi kwesokudla noma kwesobunxele
I-Vertical Offset - ihambisa amakhophi phezulu noma phansi.
I-engela - ishintsha i-engeli yawo wonke amakhophi.
I-Opacity - iguqula ukubonakala kwe-watermark yawo wonke amakhophi.
Linga ukuthayela usebenzisa ukuhlola kuqala. Ngokuvamile ukuthayipha kwenziwa nge-watermark eyi-1 kusetshenziselwa ukwengeza ukuvikelwa okwengeziwe esithombeni. Kepha, ukuze ujabulise ungavula ama-watermark ama-2 noma ngaphezulu anethayela ngasikhathi sinye ngomphumela okhethekile.
Ithayela elingenhla lisebenzisa i-1 Text Watermark kepha futhi kungenzeka ukuthi usebenzise i-Text Arcs, Graphics nezinye izinhlobo ze-watermark. Zingaba zicashile kakhulu kunalokhu okungenhla kepha besifuna ukwenza ukuthayipha kubonakale ngosayizi omncane webhukwana.
Faka Izinhlamvu ezikhethekile. Phezulu kwekhibhodi kuzilungiselelo ze-'Text Watermark 'yilokhu:
Abokuqala abathathu bachofoza ngokusobala labo ukufaka lezo zinhlamvu (i-copyright, uphawu lokuhweba olubhalisiwe nezimpawu zophawu lwentengiso).
Amathegi alusizo ngendlela emangalisayo! Sebenzisa okuthi 'Faka umaki' phezulu kwekhibhodi (okubonwe ngenhla) ukubeka iMetadata (njengemodeli yekhamera, usuku lokudala, izinombolo ezilandelanayo, igama lefayela, indawo, njll.) Kusuka kuleso sithombe noma ividiyo ibe yi-watermark ebonakalayo kuleso sithombe ividiyo. Kukhona ama-watermark wesibonelo afika nohlelo lokusebenza kepha ungawasebenzisa ukudala i-watermark yakho enziwe ngezifiso ukubonisa imininingwane ehlukahlukene ezithombeni zakho ezohluka ngokuya ngemethadatha ekuso leso sithombe.
Ukuze usebenzise amathegi thinta inkinobho ethi 'Faka ithegi' oyiswe kuleli khasi:
Kusithombe-skrini esingenhla ngezansi 'Bonisa Bonke Omaka' sibonisa ngokuzenzakalelayo. Uma 'Amathegi Atholakalayo Kuphela' kukhethwa kuphela omaka abangaphakathi kwesithombe esikhethiwe abazovela.
Ithegi ngalinye linefomethi, lihlala liqala ngo-% ukuze uhlelo lukhombe ukuthi umaki yini. Ngaphansi kwethegi imininingwane evela kwimethadatha esithombeni esikhethiwe. Uma kungekho sithombe esikhethiwe (isithombe esibonisa ekhasini le-Canvas) ulwazi lwesibonelo lujwayelekile.
Ukuhluka ngakunye okugcina ucezu oluthile lwemethadatha kusuka esithombeni. Lapha ungathinta okukodwa kokuguqukayo kwemethadatha (amathegi) ukufaka leyo mininingwane yesithombe njenge-watermark yombhalo. Leyo watermark yombhalo ingahle ifomethwe bese kufakwa eminye imibhalo ukusiza ukuchaza nokuchaza umaki.
Ukubona lokhu kusebenza, thinta omunye wamathegi angenhla bese une-watermark yombhalo enjengale.
Esibonelweni esingenhla i-% CAM1 ingukuguquguquka okuphethe imininingwane yemodeli yekhamera ekhishwe esithombeni ngasinye. 'Ikhamera:' kuyincazelo / ilebula yolwazi oluzolulandela. Ezingxenyeni zezithombe ezivela kumakhamera ahlukahlukene i-watermark engayiphrinta Ikhamera: I-Nikon kweyokuqala, Ikhamera: I-Canon kwesibili neKhamera: I-iPhone 6 Plus ngomhla wesithathu.
Bona i-watermark efenda ezansi kwalesi sithombe ekhombisa ikhamera esetshenzisiwe nolunye ulwazi.
Kuyamangaza ukuthi ukungeza ama-watermark amathathu nethegi kungayenzela isithombe.
ISU: Ithegi eyodwa ewusizo kakhulu yi-% WCNT. Sebenzisa lokhu ngeqoqo lezithombe ukubeka inombolo ekhuphukayo ngokuqinile esithombeni. Ngakho-ke, uma unezithombe ezingama-300 ku-batch futhi une-watermark yombhalo enale thegi kanjena:
Inombolo% WCNT yama-300
Ngemuva kwalokho isithombe ngasinye sizoba ne-watermark esho okuthile okufana neNombolo 17 ka-300.
Sihlala sengeza kumathegi. Ukuze ufunde kabanzi ngamathegi iya ku-Text Watermark qhafaza Faka u-Tag bese ubheka imininingwane kulowo nalowo maki.
ISU: Akunakwenzeka ukuba namafonti ahlukene nosayizi bamafonti ngaphakathi kwe-watermark yombhalo eyodwa ngakho-ke uma ufuna ukwenza lokho yenza ama-watermark wombhalo ahlukene.
I-Arc Text Watermark ikhiqiza i-watermark yombhalo endleleni egobile. Ngezansi kukhona konke izilungiselelo zayo, izilungiselelo eziningi bese kuba enye i-watermark. Indlela engcono kakhulu yokuqonda lokhu ukuzama nokuzivivinya. Inezilungiselelo eziningi ke i-watermark ye-'Text '. Lezo zilungiselelo ezingeziwe zichazwe ngezansi.
Bona incazelo yamasethingi wombhalo wokuqala Igama, Umbhalo nosayizi ku-watermark yombhalo ngenhla.
Ukulungisa isikhala phakathi kwezinhlamvu. Ngokufana nokwenza ikherning kepha ukwenza ikherning kulungisa isikhala esiphakathi kwezinhlamvu ezi-2 ezithile kanti i-'Spacing 'ingeza noma isusa isikhala phakathi kwazo zonke izinhlamvu ngokulingana.
Lungisa usayizi werediyasi ngo-% kuze kufike kubude obuvundlile noma obubheke phezulu kunoma yikuphi okuncane.
Ikhulisa usayizi wombuthano ngokuya ngobude bamagama nosayizi wefonti.
A kuya ∀
Hudula isilayida ukushintshanisa umbhalo ozungeze iringi. Noma thayipha inkambu yonke (isb. 14) noma idesimali (isb. 14.5) inamba enkambu.
Ilawula umbala nokufiphala kwengaphakathi lendingiliza.d
IBitmap / Ilogo
Ama-Watermark we-Graphic alungele ama-logo, ubuciko namasiginesha. Sebenzisa i-logo yakho noma imuphi umdwebo kodwa kudingeka abe ifomethi ekhethekile yemidwebo ebizwa nge-.png enengemuva elisobala. Amasiginesha wesampula, izimpawu neminye imidwebo esiyifakayo inezizinda ezisobala futhi ingamafayela we-.png. Lokho kusho ukuthi noma ngabe umdwebo uyisikwele kuphela isiginesha uqobo ekhombisa nokuthi lokho okungekona ukusayina kusobala okuvumela isithombe sangemuva ukuthi sibonakale. Ifomethi yefayela yokwenza lokhu ibizwa nge
Ngezansi uzofunda ukuthi ungenisa kanjani i-png nokuthi ulakha kanjani ifayili le-png.
Q: Kungani usebenzisa i-.png ngokusobala kwe-logo ye-watermark esithombeni?
.png nge obala
Isizinda esimhlophe sibangelwa ukusebenzisa noma:
a) .png ngaphandle ukwenza izinto obala noma
A: Yomibili le midwebo yesitembu ngenhla iyisikwele.
I-logo yethu yesitembu, iyi-PNG ebonakalayo. Le PNG inezindawo ezisobala, ngakho-ke isitembu sibonakala sizungezwe ingemuva nje.
Kungumfanekiso ofanayo kepha kungaba i-jpg noma i-.png ngaphandle kokubonisa ngale ngakho ibhokisi elimhlophe libonisa njengesizinda sesitembu sesibili.
Hlola Imibuzo Evame Ukubuzwa (ngezansi) noma i-Google 'png' ne 'transparency' ukuze ufunde kabanzi ngokwenza amafayela we-.png ngokusobala.
Ukwakha i-Graphic / Logo Watermark kufana nokudala i-Text Watermark. Umehluko kuphela ukuthi singenisa isithombe esikhethekile.
Idlulisela uphawu lwakho ku-iOS
QNgingenisa kanjani i-logo / graphic yami kusuka kudivayisi yami noma iwebhu kuhlelo lokusebenza lwe-Apple's Photos ku-iPhone / iPad yami?
AKunezindlela eziningi zokungenisa ifayela kepha sebenzisa eyodwa kuphela yalezi.
I-imeyili (elula) - ilogo ye-imeyili noma ingcaca kuwe. Bese uya kuleyo imeyili kudivayisi yakho yeselula bese uqhafaza bese ubamba ifayili elinamathiselwe ukuze ulilondoloze kumadivayisi wakho we-Camera Camera.
I-Apple's Airdrop - uma uyijwayele i-Airdrop ingasetshenziselwa ukungenisa i-logo / ihluzo kwi-iPhone / iPad. Ulwazi ku-Airdrop ku-Mac. Ulwazi ngokusebenzisa i-Airdrop ku-iPhone / iPad. Ukwabelana nge-png logo kusuka ku-Mac kuye ku-iOS, bamba ukhiye wokulawula bese uthepha ifayela le-logo naku-finder ku-Mac bese kuvela imenyu eyehlayo. Kule menyu khetha u-Yabelana futhi kwimenyu eyehlayo elandelayo khetha i-Airdrop. Lapho i-Airdrop ivela ngemuva komzuzwana noma emibili kufanele ikhombise idivayisi yakho ye-iOS, chofoza kanye kulokho futhi izokhombisa inqubekela phambili yokuthumela ifayili ne-beep ekugcineni. Uma ingekho idivayisi ye-iOS qiniseka ukuthi i-Airplay ivuliwe kudivayisi yakho ye-iOS.
Kusuka ku-iPhone / iPad noma kwi-Mac ungakopisha futhi unamathisele isithombe ngqo ku-Graphic Watermark.
Skena i-Watermark (uhlobo olukhohlisayo) - ingasetshenziselwa ukungenisa isiginesha noma ukuskena esithombeni. Uma unesihloko esimnyama (njengesiginesha) nesizinda esimhlophe esihlanzekile, esikhanyayo. Isebenzisa ikhamera ukuskena uphawu ephepheni bese ikhiqiza ifayela le-PNG. Kusetshenziswa ubuciko bokuqala kuzolungiswa okuphezulu. Iya lapha ukuze ufunde kabanzi.
OKUBALULEKILE: Ungasebenzisi i-ICloud Shared Album ukungenisa i- .png / logo. ICloud iguqula ifayela le-png liye ku-jpg. Ukuntuleka kokusobala manje sekuzoba nebhokisi elimhlophe elizungezile futhi ngeke kusebenze njenge-logo. Lesi yisiphazamisi esibikiwe ku-Apple's iCloud Shared Album.
KUBALULEKILE: Kunzima ukunquma kudivayisi ye-iOS ukuthi ngabe ifayili liyi-.png noma cha. Ngakho-ke, sidale indlela elula. Uma wenza i-watermark yeBitmap / Logo lapho uchofoza inkinobho ethi 'Khetha' uzobona izithonjana zezithombe, phezulu kwesokudla kukhona i ne-circle nxazonke zesithonjana
thepha lokho futhi kuzonamathisela isithonjana ngasinye ngohlobo lwefayela, ukulungiswa, usayizi nosuku / isikhathi sokudala. Kuyasiza kakhulu.
Dala iBitmap / Ilogo Watermark
Iya ekhasini lama-Watermark, khetha u-'Yakha i-Watermark entsha 'bese ukhetha i-'Bitmap Graphic'. Manje kuzilungiselelo ze-'Bitmap Graphic 'kunezinkinobho ezi-2:
'Khetha' okukuvumela ukuthi ukhethe uphawu lwakho kusuka ku-albhamu yakho yekhamera noma
'Namathisela' okukuvumela ukuthi unamathisele izinto ozikopishe kwenye indawo.
Iya ekhasini lezilungiselelo lale watermark bese ushintshela kokuthandayo.
Ungasebenzisa noma imuphi umfanekiso noma isithombe kepha i-99% yesikhathi umdwebo we-.png obala uzoba yilokho okufunela i-watermark. Yonke imidwebo eyisibonelo ku-iWatermark ingama-.png's ngokusobala.
Q: Kungani ngithola isithonjana sesixwayiso kwesobunxele inkinobho ethi 'Khetha' (isithombe-skrini esingezansi)?
A: Thepha kusithonjana sesixwayiso ngakwesobunxele segama noma i-Graphic (kusithombe-skrini esingenhla) sizokutshela inkinga nesixazululo.
QNgakha kanjani isithombe (esobala .png ifomethi) ukuze ngibe i-watermark?
A: Iningi labantu lizithola kumqambi noma lizidalele zona. IGoogle yokuthi 'ilwenza kanjani ilogo?' noma 'ngiyakha kanjani i-logo png ngokusobala?'
Q: Kungani ngithola ibhokisi elimhlophe, isikwele, unxande ezungeze uphawu lwami?
A: Kusho ukuthi une-jpg hhayi i-png. Sicela ufunde konke okungenhla.
Ivumela ukukhetha isithombe esivela ku-Albhamu yekhamera kudivayisi yakho. Isithombe esifomethiwe se-.png sihamba phambili ngoba sinendawo esobala. Khetha kubonisa zonke izinto ezikwi-albhamu yakho yekhamera. Bheka ngenhla i-Q & A Ngingenisa kanjani i-logo yami.
Isithombe se-.png uma unaso ebhodini lokunameka. Ungakopisha kolunye uhlelo lokusebenza (njenge-imeyili noma izithombe) bese unamathisela lapha.
I-100% isho ububanzi noma ukuphakama noma yikuphi ubuncane balabo bobabili.
ISU - Ukuhudula kusuka ku-1 kuye ku-100% njengoba kuchaziwe ngenhla kepha ungathayipha u-1 kuye ku-300. Kungenzeka futhi ukuthayipha ngamadesimali afana no-105.5 ngosayizi ngqo.
Mirror nendawo futhi / noma isibuko zibheka. Thinta bese ubamba ukuze ubone ukubuka kuqala.
Shintsha umbala wokuqukethwe komdwebo, njenge-logo yakho, kusuka kunoma imuphi umbala kunoma imuphi umbala owufunayo. Lokhu kungasiza kakhulu ekwenzeni ukufaniswa kwemidwebo nemibala esithombeni.
I-Opacity neShadow sebenza njengoba kuchaziwe ngenhla ku-Text Watermark.
Lapho usufike ku-'Done 'zonke ezinye izilawuli ziyatholakala futhi zichazwe ngenhla ku-Create Text Watermark.
IVector Watermark isuselwa ekubonisweni kwesithombe ngezibalo. I-vector isebenzisa amaphoyinti, imigqa, amajika namanye ama-graphic primitives kumdwebo. Lokhu kusho ukuthi ngokungafani nomfanekiso we-bitmap ongabukeka uvimba ngosayizi ohlukile i-vector ibukeka iphelele kubo bonke osayizi.
I-iWatermark + inelabhulali enkulu eyakhelwe ngaphakathi yama-vector SVG. I-SVG yifomethi ethile yamavectors.
Lokhu okungenhla kuyisibonelo sokusebenzisa kanyekanye isithombe se-SVG vector (impungushe), imethadatha (engabonakali) kanye nama-watermark wombhalo ama-2 (Ayikho imvula… I-Fox Photography).
OKUBALULEKILE: Ama-watermark acashile ngokuvamile ahamba phambili. Kepha kulesi sithombe esincane bekubalulekile ukusebenzisa ama-watermark wokuqhathanisa okuphezulu ukuze sibonakale kuzithombe-skrini ezincane kule manuwali. Enkulumweni enkulu yalesi sithombe uma i-Fox ne-Logo esikhundleni somhlophe kwakungomunye wemibala esithombeni, njengoluhlaza okotshani noma onsundu, khona-ke yayizohlangana nesithombe bese isabonakala. Isinqumo se-watermark esinokungafani okuqinile noma okucashile konke kuncike enhlosweni yakho.
Olunye uhlobo oluwusizo yiBorder Watermark. Ibuye isebenzise ubuciko be-SVG (ukuhumusha okuphelele kubo bonke osayizi) ukudweba imingcele ezungeze isithombe sonke nokubhalwa phansi emakhoneni. Sebenzisa i-Pick ebonwe ngezansi ukukhetha isithombe kulabhulali yomngcele. Imingcele inesilungiselelo esikhethekile esibizwa ngokuthi:
hich ifaka umngcele ebangeni olisethile.
Ungasebenzisa imingcele ukugqamisa lowo muntu okhethekile. :)
Isithombe sesibonelo se-QR ngezansi siphethe iwebhusayithi yethu i-url, https://plumamazing.com. Izinhlelo zokusebenza zekhamera ku-iOS (ku-iOS) kanye nohlelo lokusebenza lwekhamera emsulwa ku-Android lungaskena futhi lusebenze kulwazi kumakhodi we-QR. Kukhona nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi zesithwebuli se-QR ezitholakala ezitolo zohlelo lokusebenza. Skena ikhodi ye-QR engezansi bese uthola ithuba lokuya kusayithi lethu ngokuzenzekelayo. Ungenza eyodwa yesayithi lakho noma kunoma yiliphi ikhasi elinemininingwane ofuna ukuyibonisa.
Izibonelo zokusetshenziswa. Ama-QR angasebenziseka njenge-watermark ezithombeni nakwezinye ihluzo ezingabamba igama, i-imeyili, i-url yokuyisa abantu kusayithi lakho noma eminye imininingwane ngokuya ngobuhlakani bakho.
2. Watermark izithombe zakho nge-QR equkethe i-url yakho, i-imeyili, i-copyright nolunye ulwazi. Kuhle ukugcina uxhumano lwakho nesithombe se-Facebook, Twitter neminye imithombo yezokuxhumana. Uma ulayisha isithombe kumasayithi wokuxhumana nabantu bavame ukususa imethadatha. Amasayithi omphakathi awasusi ama-watermark abonakalayo njengombhalo, isiginesha, ihluzo noma ama-QR.
Dala i-QR-Code Watermark!
Kusuka ekhasini elithi 'New Watermark' khetha u-'QR-Code… '. Yinike igama bese uzivumelanisa nokunambitheka kwakho. Gcina engqondweni uma wehlisa usayizi nokukhanya kungahle kube nzima ngesithwebuli ukufunda lonke ulwazi. Linga futhi ufunde kabanzi ngama-QR kuwebhu ukuthola eminye imininingwane.
ISU: Chofoza lapha ukuthola eminye imininingwane nge-QR Code nokufundeka
Isiginesha (kusuka eLatin: signare, “to sign”) yisithombe esibhalwe ngesandla (futhi esivame ukubhalwa ngesitayela) segama lomuntu umuntu alibhala emaphepheni njengobufakazi bokuthi ungubani nenhloso. Isiginesha ifanekisela umdali wemisebenzi. Abaculi abaningi abadumile (uClaude Monet, Albrecht Durer, uHenri de Toulouse-Lautrec, uSalvador Dalí, uJohannes Vermeer, uWassily Kandinsky, uJoan Miró, uHenri Matisse, uHenri Rousseau, uMaxfield Parrish nabanye abaningi basayine umsebenzi wabo. Ungavumeli noma ngubani akutshele ngenye indlela, isiginesha ingenza i-watermark yakudala.
I-'Watermark yesiginesha 'ingakhiwa nge-'Siginesha Scan' noma ngehluzo (ifayela le-.png elisobala) olifakayo. Imidwebo enokuqhathanisa okuphezulu njengesiginesha lapho uyinki ovela esibayeni umnyama noma okungenani umnyama futhi isizinda somhlophe sisebenza kahle.
Dala i-Watermark Yesiginesha!
Izindlela ezi-3 zokufaka isiginesha yakho bese uyisebenzisa njenge-watermark.
Thatha ishidi lephepha elimhlophe elikhanyayo elingenamanzi, ipeni likayinki omnyama noma i-sharpie bese ubhala isiginesha yakho maphakathi. Yenza leli shidi likhanyiswe ngokulinganayo ngaphandle kwezithunzi.
Ukusuka ekhasini elithi 'New Watermark' chofoza ku-'Siginesha Scan 'ukubona leli khasi.
Chofoza inkinobho ethi 'Skena Isiginesha', kuzokusa kwikhamera lapho ungathatha khona ukuskena / isithombe sesiginesha yakho. Lokhu kungathatha imizamo embalwa ukuthola ukulengiswa kwayo.
Skena ukugqama - Yiba yinkosi yeJedi ulungise amandla okukhanya nobumnyama endaweni yonke. Lesi yisethingi esibaluleke kunazo zonke sokulungisa ukuthola isiginesha yakho nokususa izithunzi noma imibimbi ephepheni. Okumhlophe kuzosuswa futhi kuphela ama-bits amnyama ayinki azosala kufayela le-.png alidala kusiginesha yakho.
Thola isiginesha yakho kusuka ku-albhamu yezithombe. Ungaba neskena esenziwe kwesinye isithwebuli noma ezinye izindlela ongazingenisa ku-albhamu yakho yezithombe bese imininingwane iWatermark +.
Chofoza inkinobho ethi 'Dweba' ngenhla ukuze ubhale ngesandla kusiginesha yakho usebenzisa umunwe wakho. Cindezela bese ubamba “indwangu yesiginesha esetshenzisiwe” ngesekhondi lesibili, kuze kube yilapho indwangu ikhombisa uhlaka oluluhlaza oluzungezile, bese uqala ukusayina isiginesha yakho ngomunwe wakho noma ngepensela lika-Apple.
Zonke ezinye izilungiselelo zichazwe ku- 'Text Watermark' ngenhla.
Manje usungasayina kalula izithombe ze-smartphone nezinye izithombe zobuciko ngaphambi kokuzibeka ku-facebook, twitter naku-instagram, njll.
Ukubeka isiginesha ecashile esithombeni kungenye yezindlela ezinhle zokwazisa ababukeli besikhathi esizayo ukuthi usidalile futhi ngaleyo ndlela ugcine ukuxhumana kwesithombe sakho ikakhulukazi uma kuhamba kwegciwane.
OKUBALULEKILE: Umkhawulo we-1 Metadata watemark ngesithombe ngasinye.
Kukhona okungaphezu kokuhlangana neso ngaphakathi kwefayela lesithombe sedijithali. Amafayela ezithombe awagcini kuphela idatha yesithombe kepha futhi nolwazi olumayelana nezithombe nalolo olubizwa nge- 'Metadata'. Amafayela ezithombe angafaka amakilasi ezobuchwepheshe, achazayo nawokuphatha emethadatha yezinhlobo eziningana ezinamagama afana ne-EXIF, TIFF, IPTC, njll. Ungathola i-google ukuthola eminye imininingwane. Into ebalulekile ukuthi iWatermark + isekela imethadatha njengohlobo lwe-watermark. Lokhu kusho ukuthi ungakha i-watermark engeza igama lakho, isihloko, i-copyright, njll ngaphakathi kwefayela lesithombe njengemethadatha. Olunye ungqimba lokuphepha kanye nendlela yokuqinisekisa ukuthi isithombe ngesakho.
Ku-iWatermark ungenza izinto ezintathu ezibalulekile ngemethadatha:
1. Faka imethadatha engabonakali esithombeni esine-watermark.
2. Faka i-watermark ebonakalayo ekhombisa ukukhetha kwakho kwemethadatha efakwe esithombeni.
3. Buka imethadatha yesithombe.
Dala i-Watermark yeMethadatha!
1. Ukwengeza i-watermark yemethadatha engabonakali eqala ekhasini le-'New Watermark 'khetha' iMethadatha… 'futhi uzobona leli khasi:
Lapha ungangeza umdali wesithombe nokuthi ngubani ophethe i-copyright. Faka amagama angukhiye ukusiza ukuthola leso sithombe ngokuzayo uma usebenzisa i-Lightroom noma i-Picasa. Inkambu yamazwana yenzelwe noma yini ofisa ukuyengeza.
OKUBALULEKILE: Kuphela i-1 StegoMark evunyelwe isithombe ngasinye okungenzeka.
I-StegoMark ingukuqala ukusetshenziswa kwe-watganographic watermark yezithombe futhi itholakala kuphela ku-iWatermark. I-Steganography ibhekisa kunoma iyiphi inqubo yokushumeka enye idatha ngokungabonakali kudatha yangempela yesithombe.
I-StegoMark ngoba ihlanganisa iSteganography, evame ukubizwa UStego ngamafuphi futhi Mark kusukela egameni elithi Watermark. I-StegoMark isebenzisa i-algorithm ekhethekile eyenzelwe ePlum Amazing. Lokhu kufakwa kwekhodi okukhethekile kwenza leyo datha icishe ingenzeki ukuyiqonda ngaphandle kweWatermark. Uma ingekho iphasiwedi khona-ke noma iyiphi ikhophi ye-iWatermark ingaveza umbhalo ofihliwe. Uma kukhona iphasiwedi khona-ke kuphela umuntu onephasiwedi ne-iWatermark ongadalula umbhalo ofihliwe.
Ukuqala uye ekhasini le-'New Watermark 'bese ukhetha' i-StegoMark… 'futhi uzobona leli khasi:
Ngegama elithi 'Igama' faka igama elihle elichazayo lale StegoMark
Kumyalezo 'ofihliwe' faka umbhalo ofuna ukuwushumeka kudatha yesithombe.
Ungasebenzisi i-password noma ubani one-iWatermark + angafunda umyalezo kodwa akekho omunye umuntu.
Faka iphasiwedi yobumfihlo obuningi okusho ukuthi umuntu onephasiwedi ne-iWatermark + kuphela ongafunda lowo myalezo.
Ukuze ufunde iStegoMark qala uvule isithombe esithunyelwe nge-StegoMark esithunyelwe kusuka kunkinobho ye-'Vula isithombe 'ku-iWatermark +.
Ngemuva kwalokho iya ku-i ngesiyingi esizungezile kubha ye-nav.
Thepha kulokho ukuze ubone imininingwane kulesi sithombe, chofoza ithebhu ye-'StegoMark 'njengoba kuboniswe kukhonjisiwe ngezansi. Faka iphasiwedi uma unayo bese ushaya inkinobho yokuthola ukuze ubone umlayezo ofihlekile uvele ebhokisini kuye kwesokudla.
OKUBALULEKILE: I-1 StegoMark eyodwa kuphela ngesithombe ngasinye.
Izinhlamvu ezingama-25 noma ngaphansi (kunconyiwe) ku-StegoMark zikuvumela ukuthi kube namandla kakhulu lapho kuvuselelwa / kucindezelwa kabusha isithombe se-watermark .JPG. Kungasetshenziswa kuze kufike ku-80 kepha kuzothinta ukuqina komyalezo. Khumbula ungasebenzisa isifinyezi se-URL ukwenza i-URL ibe ncane ukushumeka.
Ukuze ufunde iStegoMark Chofoza lapha
OKUBALULEKILE: Uma i-watermark ye-Resize isebenza, "uhlaka oludwetshiwe" oluzungeze isithombe lukhonjiswa ngokuluhlaza (hhayi okwesibhakabhaka njengokujwayelekile) ukukukhumbuza ukuthi i-Resize iyasebenza. Futhi kuvunyelwe i-watermark engu-1 kuphela evunyelwe ngasikhathi. Uma ukhetha entsha endala icishiwe.
Sicabanga ukukhulisa i-watermark ngoba konke okwenzayo ukwenza isithombe ngendlela oyifisayo kusenza sibe ngesakho kakhulu. Ukukhetha kwakho kwezobuciko kufaka isithombe ngobunikazi bakho. Izithombe ze-Instagram aziqali ukuba yisikwele kepha i-Instagram, ngempumelelo enkulu, yenze izithombe eziyisikwele namavidiyo isitayela sazo. Kungenzeka, ngokuzayo, ukuthi abanye osayizi nomumo bazokwenziwa badume ngabanye abaculi.
Yenza usayizi omusha njenge-watermark ivumela ama-Instagrammers ukuthi ahlole ngokushesha futhi akhiphe usayizi 'we-Instagram' ku-Instagram nakwamanye amanethiwekhi omphakathi. Kungakho abaningi bezwa ukuthi iWatermark + uhlelo lokusebenza olubalulekile lwe-Instagram.
Ngezansi isithombe esiguqulwa ochungechungeni lwezithombe-skrini, isithombe-skrini ngasinye sikhombisa izilungiselelo zokushintsha usayizi waleso sithombe.
Isithombe Sangempela Asikhulisiwe
Sihlanganise i-Aspect Fit ne-Aspect Gcwalisa izinto ezihlukaniswe ngaphambilini kusixhumi esibonakalayo entweni eyodwa ebizwa nge-zoom. Zonke izilawuli manje ezifaka ukusondeza zikuvumela ukuthi usebenzise ukubuka kuqala okubukhoma ukuthola 'ukuzwa' ngalokho ofuna ukukubona kukhishwa.
Qaphela lapho uhudula ukuthi isilawuli se-Zoom sikhiya sibonise i-Aspect Fit ku-0% Zoom ne-Aspect Fill ku-100% Zoom. Lokhu kwenzelwa ukwenziwa lula.
Enye indlela yokwenza i-watermark a ukunikeza isithombe sonke isitayela. Izihlungi ezenziwe ngokwezifiso ziholela ekuhlungweni okuningi ngezinketho eziningi. Ngeshwa asikwazi ukuzichaza zonke lapha. Sincoma ukuzama (ukudlala nxazonke) ngesihlungi esisodwa njenge-'Pixelate 'ukuthola umuzwa wokuthi basebenza kanjani. Lapho usunesihlungi esinezilungiselelo ezithile othanda ukusigcina njenge-watermark enegama elichazayo ukuze ukwazi ukusithola futhi usisebenzise ngokuzayo. Ungaqamba izihlungi zabaculi abazikhuthazayo. Isihlungi se-'Van Gogh 'singenza imibala iphile futhi sengeze i-swirl. Isihlungi se-'Ansel Adams 'singenza isithombe sibe mnyama futhi sibe mhlophe, sandise umehluko bese sengeza ubukhali. Amagama we-apt azokusiza ukuthi ubuyele enhlanganisweni yamasethingi owathola futhi uwagcine.
Izihlungi ku-iWatermark zisuselwa kuCore Image ubuchwepheshe obudalwe yi-Apple. Lesi sixhumanisi sinakho kokubili incazelo yezobuchwepheshe, imininingwane yesethingi nezithombe ezibonisa izinguquko ezingaziveza. Chofoza lapha ukuthola inkomba ecacile.
Le watermark yengezwa lapho ufuna ukushintsha ifomethi kusuka kwimidiya yokufaka. Isibonelo isithombe esifakwayo sisefomethi ye-.heic futhi ufuna ukuthi siphume ku-.jpg noma unevidiyo ye-.mov futhi ufuna ukuthekelisa ividiyo ene-watermark njenge -mp4.
Iningi labantu. Ngaphandle kwe-watermark ye 'Export Export' iWatermark + ibilokhu ithunyelwe kusukela kufomethi yefayela lokufakwayo kuya kokukhiphayo ifomethi efanayo ngokuzenzekelayo. Ifomethi yokufaka inqume ifomethi yokukhipha. Manje, ngale watermark ungashintsha ifomethi yokukhipha iye kumafomethi ahlukahlukene.
Nakhu okubukeka ngakho:
Ukuze uyisebenzise, ​​qala ngokuyinika igama uma kungenjalo uzobona uphawu oluxwayisa oluphuzi njengasesikrinini esingenhla. Unganikeza igama elichazayo njenge-'Thumela isithombe ku-PNG noma ividiyo ku-MP4 '. Uma uzoyisebenzisela izithombe khetha ifomethi yefayela elithunyelwayo oyifunayo. Thepha phambili ngemicibisholo yangemuva eceleni kwefomethi yefayela lesithombe ngenhla. Manje uma ufuna ifomethi yokukhipha yesithombe ibe ngu-.png khetha le watermark ngaphezu kwezinye ofuna ukuyisebenzisa.
Ezinye izinketho yilezi:
Susa imethadatha yendawo ye-GPS - ayikho idatha ye-GPS ezoba esithombeni esine-watermark
Susa YONKE iMethadatha - isusa yonke i-EXIF, i-IPTC, i-GPS kanye neminye imethadatha.
Gcina usuku olushintshiwe - lapho ligcina usuku olufanayo oluguquliwe njengasesithombeni sokuqala. Uma kuvaliwe kuguqula usuku olushintshiwe lube usuku lwamanje.
Gcina usuku oludaliwe - lapho ligcina usuku olufanayo olwenziwe njengasesithombeni sokuqala. Uma kuvaliwe kuguqula usuku olwenziwe lube usuku lwamanje.
Izilungiselelo ezikusithombe-skrini esingenhla ziyindlela ejwayelekile abantu abaningi abayibeka ngayo.
Izinketho zefomethi yokuthumela:
Izithombe - Okuzenzakalelayo (Okwangempela) *, HEIC, JPEG, PNG, ne-GIF.
Ividiyo - Okuzenzakalelayo (koqobo) *, MOV, M4V ne-MP4.
* Okuzenzakalelayo (Okwangempela) kusho okuzenzakalelayo kokuthekelisa kunoma iyiphi ifomethi yokufaka. Le yindlela iWatermark + esebenza ngayo selokhu yadalwa. Awudingi ukusebenzisa 'Izinketho Zokuthekelisa' nhlobo ukuze isithombe esine-watermark sibe nefomethi efanayo nesithombe sokuqala.
Okokuqala, ukuze ukhethe iqoqo lezithombe ezingu-2 noma ngaphezulu, cindezela inkinobho ethi 'Skhetha Izithombe (ezinolwazi)' ngezansi bese ukhetha izithombe zakho.
Uma udinga, thepha lapha ukuze ufunde mayelana nendawo yemidiya yokungenisa kubhukwana. Okulandelayo khetha ama-watermark ofuna ukuwasebenzisa bese uqala ukukhipha ngokuthepha isithonjana esithi 'Yabelana' kubha ye-nav ngezansi kwesokudla. Thepha okuthi 'Londoloza Isithombe' okuzibeka zonke izithombe ezifakwe uphawu lwe-watermark ku-albhamu yekhamera ye-Apple Photos. Ukucutshungulwa kweqoqo ngeke kwenziwe ekuthekeliseni okuqondile ezinkundleni zokuxhumana njenge-Facebook, Twitter, njll. Ngemva kokuthi isithombe sokuqala sesiqedile ukumaka uzothola le ngxoxo (ngezansi).
ISU: Sebenzisa u-'Khetha izithombe (ngolwazi) 'ukuze ukhethe izithombe eziningi: thepha nesithombe bese uya esithombeni sokugcina bese uthepha kabili ukuze ukhethe zonke izithombe kusuka kowokuqala othephelwe kokuthephelwe kabili.
Ukukhetha i- "Batch Process All" kuvumela i-iWatermark + ukuthi ithathe izintambo, i-watermark, futhi ithumele zonke izithombe ngaphandle kokungenelela komsebenzisi.
OKUBALULEKILE: Ngenxa yemikhawulo ye-Apple API, ukucubungula i-batch, ngaphandle kokungenelela, kungenzeka kuphela ku-Apple's Camera Roll. Ukuthumela izithombe eziningi ku-Facebook, Twitter, Dropbox, njll kungenziwa kuphela ngokulandelana, ngakunye.
I-iWatermark+ isebenza ku-Apple Photos njengesandiso sokuhlela.
Ukuze usebenzise ku-Apple Photos
Vula uhlelo lokusebenza lwe-Apple Photo esithombeni.
Phezulu kwesokudla kumpompi wesithombe, 'Hlela' (isithombe-skrini ngezansi).
Ekhasini elilandelayo kunesithonjana samachashazi angu-3 phezulu kwesokudla. Thepha (isithombe-skrini ngezansi).
Ikhasi liyashelela phezulu futhi libukeka kanje. Thepha ku-iWatermark+. Uma ungayiboni cindezela entweni ethi Okwengeziwe futhi uthole i-iWatermark noma ezinye izinhlelo zokusebenza ezihlela izithombe lapho.